Penile စိုက်ထူခြင်းနှင့် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ရောဂါဗေဒ (ဇီဝကမ္မဗေဒ (၂၀၀၆) - သင့်ရဲ့ ဦး နှောက်ပေါ်က Porn On Brain)
Erectile အလုပ်မဖြစ်၏ penile စိုက်ထူခြင်းနှင့် Pathophysiology (2006) ၏ဇီဝကမ္မဗေဒ
Urol Clin မြောက်မိပါတယ်။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC 2006 ဇန်နဝါရီလ 25 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
Urol Clin မြောက်မိပါတယ်။ 2005 နိုဝင်ဘာလ; 32(4): 379-v ။
Doi: 10.1016 / j.ucl.2005.08.007
ရောဘတ် C. ဒင်း, MDa နှင့် တွမ်အက်ဖ် Lue, MDb
ထုတ်ဝေသူ၏နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ထားသောဤဆောင်းပါးတွင်ရရှိနိုင်ပါသည် Urol Clin မြောက်အမေရိက Am
erectile function ကို၏မော်လီကျူးများနှင့်လက်တွေ့နားလည်မှုတစ်ဦးအထူးသဖြင့်အစာရှောင်မှုနှုန်းမှာမြေပြင်ရဖို့ဆက်လက်။ မျိုးဗီဇရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအတွက်တိုးတက်မှုတွေချောမွေ့ကြွက်သားအပန်းဖြေ / ကျုံ့လမ်းကြောင်း၏အသိပညာအလုပ်လုပ်၌အလွန်ကိုကူညီခဲ့ကြပါပြီ။ intensive သုတေသနအများကြီးတိုးတက်လာလြှော့သိရသည်။ အဆိုပါနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်လမ်းကြောင်း၏နားလည်မှုဟာ tumescence ၏မော်လီကျူးနားလည်မှုထဲမှာမသာကိုကူညီခဲ့ပေမယ့်လည်း erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများ၏ကုထုံး၌အလွန်ကိုကူညီခဲ့သိရသည်။ လူတအသက်အရွယ်သို့မဟုတ်ခွဲစိတ်ကုသခြင်းကိုသည်းခံအဖြစ်, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုထိန်းသိမ်းတားဆီးကာကွယ်ရေးကုထုံးစတင်ပါပြီ။ အားလုံးလက်တွေ့ဆောင်ရွက်ချက် erectile function ကိုနှင့်ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အပြည့်အဝ, ခန္ဓာဗေဒမော်လီကျူးများနှင့်ပြောင်းလဲနေသောအသိပညာအခြေစိုက်စခန်းအတွင်းရှိ၎င်းတို့၏အစအဦးဆင်းသက်လာ။ ဤအခနျးတှငျ erectile function ကို၏အစိတ်အပိုင်းများကိုရှင်းပြခဲ့လိမ့်မည်။
Hemodynamics နှင့်စိုက်ထူခြင်းနှင့် Detumescence ၏ယန္တရား
အဆိုပါ penile erectile တစ်ရှူး, အထူးလိုဏ်ဂူချောမွေ့ musculature နှင့်အဆိုပါ arteriolar ၏ချောမွေ့ကြွက်သားနှင့်သွေးလွှတ်ကြောနံရံများ, အ erectile လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ အဆိုပါ flaccid ပြည်နယ်အတွက်အဲဒီချောမွေ့ကြွက်သားလုပ်သူများအာဟာရရည်ရွယ်ချက်သည်သွေးလွှတ်ကြောစီးဆင်းမှုကိုသာသေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကိုခွင့်ကန်ထရိုက်နေကြသည်။ အောက်စီဂျင် (PO2) ၏အသှေးကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖိအား 35mmHg အကွာအဝေးအကြောင်းပါ။ 1 အဆိုပါ flaccid လိင်တံအေးလွန်းတဲ့ရာသီဥတုနှင့် phenylephrine ဆေးထိုးပြီးနောက်နောက်ထပ်ကျုံ့ခြင်းဖြင့်သက်သေအဖြစ်, ကျုံ့တဲ့အလယ်အလတ်ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွတွင်းအာရုံကြောဆိပ်ကမ်းကနေ neurotransmitters ၏လွှတ်ပေးရန်အစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤချောမွေ့ကြွက်သားများနှင့်အောက်ပါဖြစ်ရပ်များ၏အပန်းဖြေအတွက်ရလဒ်များ:
အဆိုပါ diastolic နှင့်နှလုံးကျုံ့အဆင့်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်တိုးမြှင့်သွေးစီးဆင်းမှုအားဖြင့် arterioles နှင့်သွေးလွှတ်ကြောများ၏ Dilatation
အဆိုပါတိုးချဲ့ sinusoids အားဖြင့်အဝင်အသှေးကို Trapping
အဆိုပါ Tunica albuginea နှင့်အရံ sinusoids အကြား subtunical venular plexuses ၏ compression, ထိုသွေးပြန်ကြောထွက်သွားလျှော့ချ
အတွင်းမြို့ပတ်ရထားနှင့်ပြင် longitudinal အလွှာအကြားသံတမန်များသွေးပြန်ကြော occludes နှင့်ထပ်မံနိမ့်ဆုံးဖို့သွေးပြန်ကြောထွက်သွားလျော့ကျရာယင်း၏စွမ်းရည်, ရန် Tunica ၏ဆန့်
ယင်းစိုက်ထူပြည်နယ် (အပြည့်အဝ-စိုက်ထူအဆင့်) ဖို့မှီခိုအနေအထားကနေလိင်တံပေါ်ပေါက်သည့် (အကြောင်းကို2mmHg မှ) PO90 အတွက်တိုးနှင့် (100 မီလီမီတာ Hg န်းကျင်) intracavernous ဖိအား,
အဆိုပါ ischiocavernosus ကြွက်သား (တင်းကျပ်-စိုက်ထူအဆင့်) ၏ကျုံ့နှင့်အတူ (ပြဒါး၏ရာပေါင်းများစွာသောမီလီမီတာမှ) တစ်ဦးကထပ်မံဖိအားတိုးလာ
ယင်းစိုက်ထူလိင်တံ၏ထောင့်က၎င်း၏အရွယ်အစားနှင့် puboischial Rami (ထို crura) နှင့်ဆီးခုံမို့မို့အရိုးကို (suspensory နှင့် funiform ရွတ်) ၏ anterior မျက်နှာပြင်မှ၎င်း၏ပူးတွဲမှုကဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ရှည်လျားသောမိုးသည်းထန်စွာလိင်တံတစ်ခုသို့မဟုတ်ချောင် suspensory ရွတ်နှင့်အတူယောက်ျားမှာထောင့်များသောအားဖြင့်ပင်အပြည့်အဝမာကျောမှုနှင့်အတူ 90 ဒီဂရီထက် သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
detumescence ၏အဆင့်သုံးဆင့်တိရစ္ဆာန်လေ့လာမှုမှာအစီရင်ခံထားပါပြီ။2 ပထမဦးဆုံးတစ်ဦးတံခါးပိတ်သွေးပြန်ကြောစနစ်အားဆန့်ကျင်ချောမွေ့ကြွက်သားကျုံ့၏အစကိုညွှန်းတဲ့ယာယီ intracorporeal ဖိအားတိုးပါဝငျ။ ဒုတိယအဆင့်သည်သွေးလွှတ်ကြောစီးဆင်းမှု၏ Basal အဆင့်ပြန်လည်စတင်နှင့်အတူသွေးပြန်ကြောလမ်းကြောင်းများတစ်နှေးကွေးပြန်ဖွင့်အကြံပြုတစ်နှေးကွေးဖိအားကျဆင်းခြင်းပြသထားတယ်။ တတိယအဆင့်တွင်အပြည့်အဝပွနျလညျထူထောငျသွေးပြန်ကြောထွက်သွားစွမ်းရည်နှင့်အတူတစ်ဦးအစာရှောင်ဖိအားကျဆင်းခြင်းပြသထားတယ်။
စိုက်ထူအရှင် sinusoidal အပန်းဖြေ, သွေးလွှတ်ကြော dilatation နှင့်သွေးပြန်ကြောချုံ့ပါဝငျသညျ။3 ချောမွေ့ကြွက်သားအပန်းဖြေ၏အရေးပါမှုကိုတိရိစ္ဆာန်နှင့်လူ့လေ့လာမှုများအတွက်သရုပ်ပြခဲ့သည်။4, 5
Corpus Spongiosum အများနှင့် Glans လိင်တံ
Corpus Spongiosum အများနှင့် glans လိင်တံ၏ hemodynamics အဆိုပါ corpora cavernosa သူတို့ထံမှအတန်ငယ်ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ စိုက်ထူစဉ်အတွင်းအလားတူထုံးစံများတွင်သွေးလွှတ်ကြောစီးဆင်းမှုတိုး; (ထို glans ကျော် Corpus Spongiosum အကျော်ပါးလွှာများနှင့်လုံးဝနီးပါးပျက်ကွက်) ဖုံးအင်္ကျီများကိုအနည်းငယ်မျှသာသွေးပြန်ကြော occlusive သေချာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သို့သော် Corpus Spongiosum အများနှင့် glans အတွက်ဖိအား corpora cavernosa အတွက်များထဲမှတစ်ဝက်မှတစ်ဦးတည်းသာတတိယဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Spongiosum အများနှင့် glans မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဒီအဆင့်ကာလအတွင်းကြီးမားတဲ့ arteriovenous shunt အဖြစ်အလုပ်လုပ်ပေမယ့်အပြည့်အဝ-စိုက်ထူအဆင့်စဉ်အတွင်းဘာ့ရဲ့ fascia နှင့် engorged corpora cavernosa ကြားရှိနက်ရှိုင်းသော dorsal နှင့် circumflex သွေးပြန်ကြောများ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းချုံ့, tumescence glanular မှကူညီသည်။ အဆိုပါတင်းကျပ်-စိုက်ထူအဆင့်မှာ ischiocavernosus နှင့် bulbocavernosus ကြွက်သားအခိုငျအမာထပ်မံ engorgement နှင့် glans နှင့် Spongiosum အများတွင်ပိုမိုဖိအားအတွက်ရလဒ်များသော Spongiosum အများနှင့် penile သွေးပြန်ကြော, ချုံ့။
penile စိုက်ထူ၏ Neuroanatomy နှင့် Neurophysiology
လိင်တံ၏ innervation ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ (စာနာခြင်းနှင့် parasympathetic) နှင့် somatic (အာရုံခံခြင်းနှင့်မော်တာ) နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကျောရိုးနှင့်ရံ ganglia အတွက်အာရုံခံ မှစ. , စာနာခြင်းနှင့် parasympathetic အာရုံကြောစိုက်ထူခြင်းနှင့် detumescence စဉ်အတွင်း neurovascular ဖြစ်ရပ်များကိုထိခိုက်ဖို့ corpora cavernosa နှင့် Corpus Spongiosum အဝင်ဖြစ်သောလိုဏ်ဂူအာရုံကြော, ဖွဲ့စည်းရန်ပေါင်းစည်း။ အဆိုပါ somatic အာရုံကြောအာရုံခံစားမှုနှင့် bulbocavernosus နှင့် ischiocavernosus ကြွက်သားများကျုံ့များအတွက်အဓိကအားတာဝန်ရှိသည်။
အဆိုပါစာနာလမ်းကြောင်းဟာ 11 ကနေအစပြုth အဆိုပါ2မှ thoracicnd lumbar ကျောရိုး segments များနှင့်စာနာကွင်းဆက် ganglia ဖို့အဖြူရောင် Rami မှတဆင့်ဖြတ်သန်းပါတယ်။ တချို့ကအမျှင်ထို့နောက်ယုတ်ညံ့ mesenteric နှင့်အမျှင်ဟာတင်ပါးဆုံတွင်း plexus ဖို့ hypogastric အာရုံကြောများတွင်သွားလာရာမှသာလွန် hypogastric plexuses, ရန် lumbar splanchnic အာရုံကြောကတဆင့်ဖြတ်သွားတဲ့။ လူသားမြားသညျမှာ T10 T12 ဖို့ segments များအများဆုံးမကြာခဏစာနာအမျှင်များ၏ဇာစ်မြစ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, လိင်တံမှထုတ်လုပ်တဲ့ယင်းကွင်းဆက် ganglia ဆဲလ် sacral နှင့် caudal ganglia တွင်တည်ရှိပါသည်။6
အဆိုပါ parasympathetic လမ်းကြောင်းဟာ intermediolateral ဆဲလ်ဒုတိယ၏ကော်လံ, တတိယနှင့်စတုတ္ထ sacral ကျောရိုးအစိတ်အပိုင်းများအတွက်အာရုံခံကနေပေါ်ပေါက်။ အဆိုပါ preganglionic အမျှင်သူတို့ကသာလွန် hypogastric plexus ထံမှစာနာအာရုံကြောများကပူးပေါင်းကြသည်ရှိရာတင်ပါးဆုံတွင်း plexus, ရန်တင်ပါးဆုံတွင်းအာရုံကြောထဲမှာဖြတ်သန်းရတယ်။ အဆိုပါလိုဏ်ဂူအာရုံကြောလိင်တံ innervate သောတင်ပါးဆုံတွင်း plexus ၏အခက်များဖြစ်ကြ၏။ ယင်းတင်ပါးဆုံတွင်း plexus ၏အခြားအကိုင်းစအိုလမ်းကြောင်း, ဆီးအိမ်, ဆီးကျိတ်နှင့် sphincters innervate ။ အဆိုပါလိုဏ်ဂူအာရုံကြောကိုအလွယ်တကူအစွန်းရောက်စအိုလမ်းကြောင်း၏ယစ်မျိုး, ဆီးအိမ်နှင့်ဆီးကျိတ်စဉ်အတွင်းပျက်စီးနေကြသည်။ ဤအအာရုံကြော၏သင်တန်း၏တစ်ဦးကရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်မှု iatrogenic ED ၏ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဖို့မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။7 လူ့ cadaveric ခှဲစိတျ medial နှင့်လိုဏ်ဂူအာရုံကြော (4 မီလီမီတာအတူလိုက်ပါသည့် urethra နှင့်အဆုံးစွန်သောထိုးသည့် urogenital မြှေး7ဟောင်းအဆိုပါ sphincter မှ lateral) နှင့်လိုဏ်ဂူနှင့် dorsal အာရုံကြောများအကြားမျိုးစုံဆက်သွယ်ရေး၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကိုင်းအခက်ဖော်ပြခဲ့တယ်။8
အဆိုပါစာနာစည်၏ဆွ detumescence ဖြစ်ပေါ်စေသည်သော်လည်းယင်းတင်ပါးဆုံတွင်း plexus နှင့်လိုဏ်ဂူအာရုံကြော၏ stimulation, စိုက်ထူဖြစ်ပေါ်သည်။ ဒါဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်း sacral parasympathetic input ကို detumescence တာဝန်ရှိသည် tumescence နှင့် thoracolumbar စာနာလမ်းကြောင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည်ကြောင်းဆိုလို။ ကြောင်နှင့်ကြွက်နှင့်အတူစမ်းသပ်ချက်များတွင် L4 သို့မဟုတ် L5 အောက်ကကျောရိုး၏ဖယ်ရှားရေးသတင်းများအရအပူသို့မဟုတ်သိသိသာသာစိုက်ထူထုတ်လုပ် medial preoptic ဧရိယာ၏လျှပ်စစ်ဆွအတွက်အမျိုးသမီးနှင့်အတူတုံ့ပြန်မှု erectile တုံ့ပြန်မှုပေမယ့်နေရာချထားဖျက်သိမ်း။9, 10 Paick နှင့် Lee ကလည်း apomorphine-သွေးဆောင်စိုက်ထူကြွက်များတွင် psychogenic စိုက်ထူဆင်တူသည်နှင့် sacral parasympathetic စင်တာများမှဒဏ်ရာကိစ္စတွင်အတွက် thoracolumbar စာနာလမ်းကြောင်းအားဖွငျ့သွေးဆောင်နိုင်ကဖော်ပြခဲ့သည်။11 ယောက်ျားသည်ခုနှစ်, sacral ကျောရိုးဒဏ်ရာနှင့်အတူအများအပြားလူနာ reflexogenic စိုက်ထူဖျက်သိမ်းဖြစ်ပါတယ်သော်လည်း psychogenic erectile စွမ်းရည်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်။ ဤရွေ့ကားနှောက်ထုတ်ယူစိုက်ထူ T12 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအောက်ပိုင်း motoneuron ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတူလူနာအတွက်ပိုပြီးမကြာခဏတွေ့ရသည်။12 အဘယ်သူမျှမ psychogenic စိုက်ထူ T9 အထက်တွင်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတူလူနာအတွက်ဖြစ်ပေါ်; အဆိုပါ efferent စာနာထွက်သွားအရှင်အဆင့်ဆင့် T11 နှင့် T12 မှာဖြစ်အကြံပြုသည်။13 ဒါ့အပြင် psychogenic စိုက်ထူနှင့်အတူထိုလူနာအတွက်လိင်တံ၏ကျရှညျနဲ့ရောင်ရမ်းခြင်းစောင့်ကြည့်လေ့လာပေမယ့်မာကျောမှုမလုံလောက်သောဖြစ်ပါတယ်နေကြသည်သိရသည်။
ဒါဟာဦးနှောက် Impulses သတင်းပို့ပုံမှန်အားဖြင့်စာနာ (ဟန့်တား norepinephrine လွှတ်ပေးရန်) မှတဆင့်သွားလာကြောင်း, ထို့ကြောင့်, (NO နှင့် acetylcholine ထုတ်) parasympathetic ဖြစ်နိုင်သောဖြစ်ပြီး, somatic (acetylcholine ထုတ်) ပုံမှန်တင်းကျပ်စိုက်ထူထုတ်လုပ်ရန်လမ်းကြောင်း။ တစ်ဦး sacral ကြိုးကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတူလူနာမှာဦးနှောက် Impulses သတင်းပို့နေဆဲ norepinephrine လွှတ်ပေးရန်တားစီးဖို့စာနာလမ်းကြောင်းအားဖွငျ့သွားလာနိုင်ပြီး, NO နှင့် acetylcholine နေဆဲ postganglionic parasympathetic နှင့် somatic အာရုံခံနှင့်အတူ synapses မှတဆင့်ဖြန့်ချိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ thoracolumbar ထွက်သွားတို့အကြား synapses ၏နံပါတ်နှင့် postganglionic parasympathetic နှင့် somatic အာရုံခံအဆိုပါ sacral ထွက်သွားထက်လျော့နည်းသောကြောင့်, ရရှိလာတဲ့စိုက်ထူကဲ့သို့ခိုင်မာသောလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
အဆိုပါ somatosensory လမ်းကြောင်းဟာအာရုံခံအဆိုပါ penile အသားအရေအတွက် receptors, glans နှင့် urethra မှာနှင့် Corpus cavernosum အတွင်းအစပြု။ လူ့ glans ခုနှစ်တွင်လိင်တံမြောက်မြားစွာ afferent နေလနေသောခေါင်းစဉ်: 10: 1 တစ်အချိုးတွေနဲ့အာရုံကြောနောက်ဆုံးတွင်နှင့် corpuscular receptors အခမဲ့ဖြစ်သည်။ အဆိုပါအခမဲ့အာရုံကြောနောက်ဆုံးတွင်ပါးလွှာ myelinated တစ်ဦးကနေဆင်းသက်လာကြသည်δ နှင့် unmyelinated ကို C အမျှင်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်အခြားမည်သည့် cutaneous ဧရိယာနှင့်မတူဘဲဖြစ်ကြသည်။14 အဲဒီ receptor တွေကနေအာရုံကြောအမျှင်တွေဆုံတဲ့အခါလိင်တံရဲ့ dorsal nerve အစုအဝေးတွေဖြစ်လာပြီး pudendal အာရုံကြောဖြစ်လာဖို့အခြားအာရုံကြောများနဲ့ဆက်သွယ်ပေးပါတယ်။ Lumbosacral အပိုင်း၏အလယ်ပိုင်းမီးခိုးရောင်ဒေသရှိကျောရိုးအာရုံခံဆဲလ်များနှင့် Interneurons များကိုရပ်တန့်ရန် S2 – S4 အမြစ်များမှတစ်ဆင့်ကျောရိုးထဲသို့ဝင်သည်။15 ဤအအာရုံခံအာရုံခံ၏ activation အာရုံခံအမြင်များအတွက် thalamus နှင့်အာရုံခံ cortex မှ spinothalamic နှင့် spinoreticular လမ်းကြောင်းအားဖွငျ့နာကျင်မှု, အပူချိန်, နှင့်ထိတွေ့မှု၏မက်ဆေ့ခ်ျပို့ပေးသည်။ တစ်ဦးသက်သက်သာ somatic အာရုံကြောအဖြစ်မှတ်ခံရဖို့အသုံးပြုတဲ့လိင်တံ၏ dorsal အာရုံကြော; သို့သော်အာရုံကြောမူလအစအတွက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဖြစ်သည့်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase (NOS) ကိုများအတွက်စမ်းသပ်အပြုသဘောအစုအဝေးကို, ဘားနက် et al အားဖြင့်လူ့အတွက်သရုပ်ပြပါပြီ။ နှင့် Carrier နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအားဖြင့်ကြွက်များတွင်။16, 17 Giuliano နှင့်အပေါင်းအသင်းများအနေဖြင့်လည်း L4 – L5 အဆင့်ရှိစာနာမှုကွင်းဆက်ကိုနှိုးဆွခြင်းသည်လိင်တံ၏ dorsal အာရုံကြောကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်နှင့် dorsal အာရုံကြောကိုနှိုးဆွခြင်းသည်ကြွက်များ၏ lumbosacral စာနာမှုကွင်းဆက်တွင်တုန့်ပြန်သည့်ထုတ်လွှတ်မှုကိုဖြစ်စေသည်။18 ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း dorsal အာရုံကြော somatic ကြောင့် erectile နှင့် ejaculatory function ကိုနှစ်ဦးစလုံးထိန်းညှိရန်ကို enable ပြုလုပ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအစိတ်အပိုင်းများကိုနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူရောထွေးအာရုံကြောကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
စတုတ္ထ sacral ကျောရိုးအစိတ်အပိုင်းများမှဒုတိယအတွက် Onuf ရဲ့နျူကလိယ somatomotor penile innervation ၏ဗဟိုသည်။ ဤရွေ့ကားအာရုံကြောဟာ ischiocavernosus နှင့် bulbocavernosus ကြွက်သား innervate ဖို့ pudendal အာရုံကြောဖို့ sacral အာရုံကြောများတွင်ခရီးသွားလာ။ အဆိုပါ ischiocavernosus ကြွက်သားကျုံ့ဟာတင်းကျပ်-စိုက်ထူအဆင့်ထုတ်လုပ်သည်။ အဆိုပါ bulbocavernosus ကြွက်သား၏စည်းချက်ကျုံ့သုတ်ရည်လွှတ်ဘို့လိုအပ်ပေသည်။ တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများမှာတော့ဦးနှောက်ကို stem စာနာစင်တာများ (A5-catecholaminergic ဆဲလ်အုပ်စုတစ်စုနှင့် locus coeruleus) အားဖြင့် sacral ကျောရိုး motoneurons တိုက်ရိုက် innervation ဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။19 pudendal motoneurons ၏ဤ adrenergic innervation သုတ်ရည်လွှတ်စဉ်အတွင်း perineal ကြွက်သားစည်းချက်ကျုံ့တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, oxytocinergic နှင့်အထီးကြွက်များတွင် penile စိုက်ထူခြင်းနှင့် perineal ကြွက်သားကိုထိန်းချုပ် lumbosacral အရေးပါ၏ serotonergic innervation ကိုလည်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။20
လိင်အင်္ဂါဆွများ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်သဘာဝအပေါ် မူတည်. အများအပြားကျောရိုးတုံ့ပြန်မှုဟာမအင်္ဂါ၏ဆွခြင်းဖြင့်ရူးနှမ်းနိုင်ပါသည်။ အကောင်းဆုံးလူသိများလိင်အင်္ဂါအာရုံကြောစာမေးပွဲနှင့် electrophysiologic အောင်းနေချိန်စမ်းသပ်ခြင်း၏အခြေခံဖြစ်သော bulbocavernosus တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ bulbocavernosus နှင့် ischiocavernosus ကြွက်သားချို့ယွင်း penile စိုက်ထူအယှက်နိုင်ပေမဲ့, ခြုံငုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအကဲဖြတ်တစ်ဦး bulbocavernosus တုံ့ပြန်မှုရယူ၏အရေးပါမှုကိုအငြင်းပွားစရာဖြစ်ပါတယ်။
Supraspinal Pathways နှင့်စင်တာများ
တိရစ္ဆာန်များအတွက်လေ့လာမှုများ medial preoptic ဧရိယာ (MPOA) ဖော်ထုတ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုနှင့် penile စိုက်ထူများအတွက်အရေးကြီးသောပေါင်းစည်းမှုစင်တာများအဖြစ် hypothalamus နှင့် hippocampus ၏ paraventricular နျူကလိယ (PVN) ရှိသည်ဟု: ဤဧရိယာ၏ electrostimulation ဒီ site ကန့်သတ်သုတ်ရည်ထိမှာစိုက်ထူနှင့်တွေ့ရှိရပါသည်ဖြစ်ပေါ်သည်။21, 22 Marson et al ။ ကြွက် Corpus cavernosum သို့ Pseudo-ခွေးရူးပြန်ရောဂါဗိုင်းရပ်စ်ပိုးထိုးသွင်းခြင်းနှင့်ဦးနှောက်ကို stem နှင့် hypothalamus သည်ကျောရိုးထဲမှာအာရုံခံမှအဓိကတင်ပါးဆုံတွင်း ganglia ကနေအမည်တပ်ထားသောအာရုံခံခြေရာခံ။22 Mallick နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုလည်းကြွက်များတွင်လိင်တံ၏ dorsal အာရုံကြောများနှိုးဆွဟာ MPOA အတွက်ဒါပေမဲ့မ hypothalamus ၏အခြားဒေသများအတွက်အာရုံခံ၏အကြောင်းကို 80% များ၏ပစ်ခတ်မှုနှုန်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ပြသခဲ့သည်။23 အဆိုပါ MPOA ထံမှ Efferent လမ်းကြောင်း (အ substantia nigra အနီး) တွင် medial forebrain ဆော့ဝဲအစုအဝေးနှင့် midbrain tegmental ဒေသရိုက်ထည့်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောပါကင်ဆန်ရောဂါသို့မဟုတ် cerebrovascular မတော်တဆမှုအဖြစ်ကဤဒေသများတွင်ရောဂါဗေဒလုပ်ငန်းစဉ်များ, မကြာခဏ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ မျောက်, ကြောင်နဲ့ကြွက်များတွင် tracing axon အဆိုပါ lumbosacral ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစိုက်ထူစင်တာများမှ hypothalamic အရေးပါထံမှတိုက်ရိုက် projection ပြသခဲ့သည်။ ဤအ hypothalamic အရေးပါအတွက်အာရုံခံ penile စိုက်ထူတွင်ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါအရာ oxytocin နှင့် vasopressin အပါအဝင် peptidergic neurotransmitters, ဆံ့။21 အများအပြားကဦးနှောက်ကို stem နှင့် medullary စင်တာများလည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ A5 catecholamines ဆဲလ်အုပ်စုတစ်စုနှင့် locus ceruleus hypothalamus, thalamus, neocortex နှင့်ကျောရိုးမှ adrenergic innervation များကိုပြသခဲ့ကြသည်။ inhibitory serotonergic innervation ထောက်ပံ့သောနျူကလိယ paragigantocellularis မှ projections လည်း, hypothalamus အတွက် limbic စနစ်, neocortex နှင့်ကျောရိုးသရုပ်ပြပါပြီ။
Positron ထုတ်လွှတ် tomography (PET) နှင့် functional MRI (fMRI) လူ့လိင်စိတ်နိုးထနေစဉ်အတွင်းဦးနှောက်ကို Activation ၏ကြီးမြတ်သောနားလည်မှုခွင့်ပြုခဲ့ပါပြီ။ ပေနှင့် fMRI စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့အတိုင်းအတာကာလ၌အထူးသဖြင့်ယခုအချိန်တွင်ကာလအတွင်းဒေသဆိုင်ရာနှောက်သွေးစီးဆင်းမှုသို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာနှောက်လှုပ်ရှားမှုအတွင်းအပြောင်းအလဲများအတွက်တိုးပွားစေပါသည်။ ဒီနည်းပညာကိုသုံးပြီး, လိင်စိတ်နိုးထလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများနှင့်အတူငယ်ရွယ်လိင်ကွဲအထီးဘာသာရပ်များအတွက်အစပျိုးသည်။ အထီးသင်တန်းသားများကိုလိင်ကြားနေပုံရိပ်တွေ (အပန်းဖြေ, မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်, ဒါမှမဟုတ်ရယ်စရာဗီဒီယို) ပြသကြသောအခါလိင်စိတ်နိုးထစဉ်အတွင်းယူပြီး scan ဖတ်ဦးနှောက်ပုံရိပ်တွေယူပုံရိပ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်နေကြသည်။ ဦးနှောက်ကို Activation စင်တာများအဖြစ် Deactivate ဒေသများသရုပ်ပြနိုင်ပါသည်။ ဤအလေ့လာမှုဒီဇိုင်းများ၏ရိုးရှင်းကြော့ဖြစ်သော်လည်းမျိုးစုံအချက်များလိင်စိတ်နိုးထတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်အထူးသဖြင့်အမြင်အာရုံသဲလွန်စများကဖြစ်ပေါ် arousal ။ ဒီလေ့လာမှုတွေ၏စာရေးဆရာများနည်းလမ်းများနှင့်သင်တန်းသားများကိုစံတစ်ခုကြိုးပမ်းမှုအများအပြားလိုအပ်သောအခြေအနေများထားရှိပြီ သို့သော်လူ့စိတ်ခံစားမှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများ၏ရှုပ်ထွေးထိန်းညှိဖို့အလွန်ခက်ခဲသည်။
1999, Stoleru et al ၌တည်၏။ အမြင်အာရုံ evoked လိင်စိတ်နိုးထစဉ်အတွင်းပေရှစ်ကျန်းမာညာသန်လိင်ကွဲအထီးလေ့လာခဲ့သည်။24 ဦးနှောက်ကို Activation ၏နေရာများ testosterone ဟော်မုန်းပလာစမာအဆင့်ဆင့်နှင့် penile tumescence ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်။ အမြင်အာရုံ evoked လိင်စိတ်နိုးထစဉ်အတွင်းသိသာ activation နှစ်နိုင်ငံယုတ်ညံ့ယာယီ cortex ညာဘက် insula, ညာယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ cortex နှင့်လက်ဝဲ anterior cingulate cortex တွင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ဒီမှတ်တိုင်လေ့လာမှုကနေလိင်စိတ်နိုးထနေစဉ်အတွင်းဦးနှောက် function ကိုများအတွက်ယာယီမော်ဒယ်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါမော်ဒယ်သူတို့ရဲ့ neuroanatomical ဒေသများနှင့်ဆက်စပ်အမြင်အာရုံ evoked လိင်စိတ်နိုးထသုံးခုအစိတ်အပိုင်းများရှိပါတယ်အကြံပြု: - နှစ်နိုင်ငံယုတ်ညံ့ယာယီ cortex, 1 အတွက်ဖျော်ဖြေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုအကဲဖြတ်ထားပါသည်) မှာစိတ်ခံစားမှု / စိတ်ခွန်အားနိုးအစိတ်အပိုင်း - 2) တစ်ဦးသိမှုဆိုင်ရာအာရုံ-သိမြင်မှုအစိတ်အပိုင်းဖြစ်စဉ်များအာရုံခံ စိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်များနှင့်အတူသတင်းအချက်အလက်, လက်ျာ insula ၌တရားယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ cortex နဲ့ဘယ်ဖက် cingulate cortex (paralimbic ဒေသများ), 3) တစ်ဦးဇီဝကမ္မအစိတ်အပိုင်းဖျော်ဖြေ - လက်ဝဲ anterior cingulate cortex အတွက် endocrine နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရလုပ်ဆောင်ချက်များကိုသြဒိနိတ်။
နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဟာလိင်ကအမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ပေစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ကို အသုံးပြု. ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ Bocher et al ။ အဆိုပါယုတ်ညံ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက် occipital cortex အတွက်တိုးချဲ့ဖွင့်သုံးသရုပ်ပြနှစ်နိုင်ငံ posterior ယာယီ cortical (လက်ဝဲထက်ပိုင်ခွင့် သာ. ကွီးမွတျ), ညာဘက်ယုတ်ညံ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကြိုတင်တိုကျရိုကျ cortex, လက်ဝဲ Post-အလယ်ပိုင်း gyrus နှစ်နိုင်ငံယုတ်ညံ့ parietal lobules, သာလွန် parietal lobules, တိုကျရိုကျတိုင် (Brodmann ဧရိယာ left 10), Pre-တိုကျရိုကျ cortex left နှင့် midbrain ဒေသများ။25 Bocher လည်း Stoleru ၏အစီရင်ခံစာမှဆန့်ကျင်သည့် medial တိုကျရိုကျနှင့် anterior cingulate အတွက် Deactivate, မှတ်ချက်ချသည်။ တနည်းကား, အမြင်အာရုံအသင်းအဖွဲ့စင်တာများအထူးသ posterior ယာယီ cortical နှင့် Post-အလယ်ပိုင်း gyrus အတွက် activated ခံရဖို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကဒီလေ့လာမှုမှာမြင်ပြီ midbrain တက်ကြွစွာ dopaminergic အာရုံခံ၏တည်နေရာမှဆက်နွယ်နေပါသည်။ အဆိုပါ midbrain ဒေသ၏ activation သည်အခြားလေ့လာမှုများအတွက်သရုပ်ပြမခံခဲ့ရပါဘူး။ ဤသည်ကို Activation ကြာရှည်ဒေါသနဲ့ဆက်စပ်နိုင်ပါသည်။ ဒီလေ့လာမှုမှာအသုံးပြုတဲ့အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွတဲ့ 30 မိနစ်စဉ်ဆက်မပြတ်ဗီဒီယိုဖြစ်ခဲ့သည်။ တခြားလေ့လာမှုအကျဉ်းအမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု (2-10 မိနစ်) ကိုအသုံးပြုပါ။
ပန်းခြံ et al ။ fMRI သုံးပြီး 12 ကျန်းမာအထီးသင်တန်းသားများကိုလေ့လာခဲ့သည်။26 ကြည့်ရှုခြင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုအပိုင်းများကို Non-ခေါ်ဆောင်သွားကလစ်များနှင့်အတူ alternated ခဲ့ကြသည်။ ဒေသတွင်းကဦးနှောက်ကို Activation ယေဘုယျအားဖြင့်ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး, cingulate gyrus, နောက်ကျနေခဲ့သည် gyrus, Corpus collosum, thalamus, caudate နျူကလိယ, globus pallidus နှင့်ယုတ်ညံ့ယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေးတွင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ တချို့က activation ဒေသများတွင်အဆိုပါယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး, ယုတ်ညံ့ယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေးနှင့်နောက်ကျနေခဲ့သည် gyrus အထူးသဖြင့်အခြားလေ့လာမှုများဆင်တူဖြစ်ကြသည်။
fMRI နှင့် penile turgidity, Arnow et al ဆက်နွယ်နေကြောင်းအမြင်အာရုံ evoked လှုံ့ဆော်မှုသုံးပြီးကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းလေ့လာမှုမှာ။ အဆိုပါ claustrum အပါအဝင်ညာဘက် subinsular / insula ဒေသတွင်း၌ activation ၏သိသာထင်ရှားသောဒေသသရုပ်ပြခဲ့သည်။ 27 ဤဒေသ၏ activation အလားတူပေသုံးပြီးအတိတ်လေ့လာမှုများတွင်တွေ့မြင်ဖြစ်ပါတယ်။24, 28 ဤဒေသတွင်အာရုံခံအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ဒီလေ့လာမှုအတွက် insula ၏ activation စိုက်ထူ၏ somatosensory အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်အသိအမှတ်ပြုမှုကိုကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်။ အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုစဉ်အတွင်း activated ခဲ့ကြသည်အခြားဦးနှောက်ဒေသများဖြစ်ကြသည်: ညာဘက်အလယ် gyrus ညာဘက်ယာယီ gyrus, လက်ဝဲ caudate နှင့် putamen နှစ်နိုင်ငံ cingulate gyri, ညာ sensimotor နှင့် Pre-မော်တာဒေသများ။ ဒါ့အပြင်သေးငယ်တဲ့ activation ညာဘက် hypothalamus တွင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ Dopamine ဟာ hypothalamus နှင့် dopamine အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသိသိသာသာပင်ဖြစ်သည်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်သောသက်သေအထောက်အထားမှစီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်။ တဖန်လက်ယာအလယ်အလတ်ယာယီ gyrus activated မြင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာဖြစ်နိုင်အမြင်အာရုံအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
2003 ခုနှစ်, Mouras et al ။ fMRI သုံးပြီး 8 ယောက်ျားကိုလေ့လာ; သို့သော်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများအသုံးပြုကြဘူး။29 အဲဒီအစားနေဆဲဓာတ်ပုံတွေ (ကြားနေနှင့်လိင်နှိုးဆွ) သင်တန်းသားများကိုလျင်မြန်စွာပြသခဲ့ကြသည်။ တိုတောင်းအမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအသုံးပြုခြင်း, သူတို့ကအစောပိုင်းအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုအစား penile tumescence ၏အမြင်မှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုများထုတ်လုပ်ပြီးမည်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်သည်။ တနည်းကား, အလယ်၏ activation နှင့်ယုတ်ညံ့ occipital gyri အများဆုံးဖွယ်ရှိသေချာပေါက်ကတော့အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုမလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းဆက်စပ်, သရုပ်ပြခဲ့သည်။ အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူ activation ပြမျိုးစုံဦးနှောက်စင်တာများအပြင် (နှစ်နိုင်ငံ parietal lobules, ယုတ်ညံ့ parietal lobule, ညာ postcentral gyrus ညာဘက် parietoccipital sulcus left, သာလွန် occipital gyrus နှစ်နိုင်ငံ precentral gyrus left), အ cerebellum3ဘာသာရပ်များနှင့် Deactivate အတွက် activation သရုပ်ပြ4ဘာသာရပ်များအတွက်။ အကွိမျမြားစှာနဲ့အခြားအစီရင်ခံစာများခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင်နှင့်ချစ်ခြင်းမိတ်ဖက်များ၏မြင်ကွင်းဓာတ်ပုံများကိုတုံ့ပြန်အတွက် cerebellum ၏ activation သရုပ်ပြပါပြီ။ ဒါကြောင့်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအဆိုပါ cerebellum အတွင်းဒေသများတွင် activation ဖန်တီးပုံရသည်။
fMRI နှင့်အတူတိုးတက်လာမှုနှင့်အတူအမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်ဦးနှောက်ကို Activation ၏အသေးစိတ်နှိုင်းယှဉ်မတူညီအုပ်စုများအပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Stoleru et al ။ လေ့လာမှုများ hypoactive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒရောဂါ (HSDD) နဲ့လူတို့အားနှိုင်းယှဉ်ပါကကျန်းမာသောအထီးဘာသာရပ်များ။30 လက်ဝဲ gyrus rectus, အ medial orbitofrontal cortex တစ်ဦးသောအဘို့ကိုအမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်ကျန်းမာယောက်ျားအတွက်၎င်း၏ Deactivate နှင့်အတူခြားနားထားတဲ့ HSDD နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် activated နျြရစျ။ ဤဒေသတွင်လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူ၏ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်ယုံကြည်ကြသည်။ ဤဒေသ၏ဆက်လက် activation HSDD ၏ pathophysiology ရှင်းပြကူညီလိမ့်မည်။ Montorsi et al ။ apomorphine များ၏အုပ်ချုပ်ရေးတွင်အောက်ပါ psychogenic erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) နှင့်အစွမ်းထက်ထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်လူတို့သညျ။31 အဆိုပါ cingulated gyrus ၏ psychogenic ED တိုးချဲ့ activation နှင့်အတူယောက်ျားအတွက်, တိုကျရိုကျ mesial နှင့်တိုကျရိုကျ Basal cortex အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုစဉ်အတွင်းရှုမြင်ကြသည်။ ဤသည်မှာတိုးချဲ့ activation psychogenic ED တစ်ခုနောက်ခံအော်ဂဲနစ် etiology အကြံပြုလိမ့်မည်။ apomorphine ၏အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူ, psychogenic ED လူနာအတွက် fMRI ပုံအစွမ်းထက်ထိန်းချုပ်မှုဆင်တူခဲ့သည်။ Apomorphine (အနျူကလိယ accumbens အတွက်မြင် hypothalamus, mesencephalon) ကို psychogenic ED လူနာအတွက် foci ၏နောက်ထပ် activation စေ၏။ ဒါ့အပြင်လက်ျာ hemisphere သိသိသာသာပိုပြီး apomorphine အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါထို့နောက်လက်ဝဲ activated ခဲ့သည်။ ညာဘက် သာ. ကြီးမြတ်လက်ဝဲ hemisphere activation လိင် evoked ဦးနှောက်ကို Activation လေ့လာမှုများအတွင်းဘုံတွေ့ရှိချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ပေနှင့် fMRI နှင့်အတူဦးနှောက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့လိင်စိတ်နိုးထ၏အလယ်ပိုင်းကို Activation ၏လေ့လာမှုအတွက်အစွမ်းထက် tool ကိုဖြစ်လာသည်။ activation အတော်များများဟာဦးနှောက်ဒေသများသည်ဤအစီရင်ခံစာများတွင်သရုပ်ပြပါပြီ။ activation အချို့သည်ဘုံဦးနှောက်စင်တာများယခုဤအအစီရင်ခံစာများမှတဆင့်ဖျောပွနိုငျ (စားပွဲတင် 1) ။ Psychogenic ED, အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသွေဖီ, orgasm ကမောက်ကမဖြစ်မှုပိုမိုမြင့်မားဦးနှောက် function ကိုတစ်ဦးကိုပြောင်းလဲစေခြင်းငှါနှင့်ဖြစ်ကောင်းယခုလေ့လာခဲ့နိုင်ရုံအနည်းငယ်သောအခြေအနေများဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများနှင့် arousal အတွင်းဦးနှောက် function ကိုနားလည်ရန်စတင်သကဲ့သို့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအခြေအနေများများ၏အကြောင်းရင်း elucidated ဖြစ်လာပေမည်။
ဦးနှောက်ကို Activation စင်တာများနှင့်သက်ဆိုင်ရာ function ကို
, psychogenic reflexogenic နှင့် nocturnal: အကျဉ်းချုပ်မှာတော့အထက်အဆောက်အဦများစိုက်ထူ၏သုံးမျိုးတာဝန်ရှိသည်။ Psychogenic စိုက်ထူအော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်လှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်စိတ်ကူးယဉ်၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။ ဦးနှောက်ထဲကနေ Impulses သတင်းပို့သည့်ကျောရိုးစိုက်ထူစင်တာများ (T က modulate11-L2 နှင့် S2-S4) ကို erectile ဖြစ်စဉ်ကိုသက်ဝင်စေရန်။ Reflexogenic စိုက်ထူအဆိုပါလိင်အင်္ဂါကိုယ်တွင်းအင်္ဂါမှထိတွေ့နိုင်သောလှုံ့ဆော်မှုများကထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Impulses သတင်းပို့သည့်ကျောရိုးစိုက်ထူစင်တာများရောက်ရှိဖို့; အခြားသူများကိုစိုက်ထူသွေးဆောင်လိင်တံဖို့လိုဏ်ဂူအာရုံကြောကနေတစ်ဆင့်မက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့နိုင်ရန်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအရေးပါကိုသက်ဝင်နေချိန်တွင်အချို့သောထို့နောက်အာရုံခံအမြင်ထဲမှာရရှိလာတဲ့, အတက်လျက်ရှိနေသည်ကိုကျေးရွာအုပ်စုလိုက်နာပါ။ စိုက်ထူ၏ဤအမျိုးအစားအထက်ကျောရိုးဒဏ်ရာနှင့်အတူလူနာအတွက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ Nocturnal စိုက်ထူလျင်မြန်စွာ-မျက်စိ-လှုပ်ရှားမှု (REM) အိပ်နေစဉ်အများအားဖြင့်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ REM sleep ကိုပြပွဲများတွင်လူသားပေစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့, အ pontine ဧရိယာထဲမှာလှုပ်ရှားမှုတိုးလာသည့် amygdalas နှင့် anterior cingulate gyrus ပေမယ် prefrontal နှင့် parietal cortex အတွက်လှုပ်ရှားမှုလျော့သွားသည်။ REM sleep ကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းသောယန္တရားဟာ pontine reticular ဖွဲ့စည်းရေးတွင်တည်ရှိသည်။ အဆိုပါ locus ceruleus အတွက် adrenergic အာရုံခံနှင့် midbrain raphe အတွက် serontonergic အာရုံခံတိတ်ဆိတ်နေကြသည်နေစဉ်။ REM အိပ်စက်ခြင်းအတွင်းနှစ်ဦးနှစ်ဖက် pontine tegmentum အတွက် cholinergic အာရုံခံ activated နေကြတယ် ဤသည် differential ကို activation REM sleep ကိုစဉ်အတွင်း nocturnal စိုက်ထူတာဝန်ရှိသည်ဖြစ်နိုင်သည်။
ချောမွေ့ကြွက်သားကျုံ့ခြင်းနှင့်အပန်းဖြေ cytosolic (က sarcoplasm) အခမဲ့ Ca နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်2+။ endothelium ကနေအာရုံကြောနောက်ဆုံးတွင်နှင့် endothelins နှင့် Prostaglands လုပ်လိုက်တာF2αထံမှ Norepinephrine ထိုကဲ့သို့သောက sarcoplasm reticulum နှင့် / သို့မဟုတ်မှဦးဆောင်ချောကြွက်သားဆဲလ်အမြှေးပါးပေါ်ကယ်လစီယမ် channel များကိုဖွင့်လှစ်အဖြစ် intracellular စတိုးဆိုင်ကနေကယ်လစီယမ်၏လွှတ်ပေးရန်အတွက်ရရှိလာတဲ့ inositol triphosphate နှင့် diacylglycerol တိုးမြှင့်ဖို့ချောချောမွေ့မွေ့ကြွက်သားဆဲလ်တွေအပေါ် receptors ကိုသက်ဝင် extracellular အာကာသကနေကယ်လစီယမ်တစ်ခုဝင်လာ။ ဤသည်2nm မှ 120 မှ 270 တစ်ကျိန်းဝပ်အဆင့်ကနေ 500 မှ cytosolic အခမဲ့ Ca700 + အတွက်ယာယီတိုးအစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။32 ဓါတ်လှေကားအဆင့်မှာ, Ca2 + calmodulin မှချည်နှောင်နှင့် myosin- အလင်း-ကွင်းဆက် kinase နှင့်အတူအပြန်အလှန်၏ဆိုဒ်များဖော်ထုတ်အဆုံးစွန်ရဲ့ခွေးပြောင်းလဲစေပါသည်။ ရလဒ် activation myosin အလင်းချည်နှောင်၏ phosphorylation catalyzes နှင့် actin ဆိုင်သောကိရိယာတန်ဆာပလာများနှင့်အင်အားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်တလျှောက် myosin crossbridges (ဦးခေါင်း) ၏စက်ဘီးစီးအစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အလင်းကွင်းဆက်၏ phosphorylation လည်း (ကြွက်သားကျုံ့များအတွက်စွမ်းအင်ပေး ATP hydrolyzes ရာ myosin ATPase, မြှင့်လုပ်ဆောင်ပုံ 1).
penile ချောမွေ့ကြွက်သားကျုံ့၏မော်လီကျူးယန္တရား။ အဆိုပါ endothelium ထံမှစာနာအာရုံကြောနောက်ဆုံးတွင်နှင့် endothelins ထံမှ Norepinephrine နှင့် PGF2a နောက်ဆုံးမှာဖြစ်ပေါ်ကြောင်းတုန့်ပြန်၏အဆငျ့ဆငျ့စတင်ရန်ချောမွေ့ကြွက်သားဆဲလ်တွေအပေါ် receptors ကိုသက်ဝင် ...
အဆိုပါ cytosolic Ca ပြီးတာနဲ့2+ အဆိုပါ Basal အဆင့်ဆင့်ပြန်လည်ရောက်ရှိသည် calcium- အထိခိုက်မခံလမ်းကြောင်းကျော်ယူပါ။ တစ်ခုမှာထိုကဲ့သို့သောယန္တရားကိုလည်း cytosolic Ca အတွက်မဆိုပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲတိုးမြှင့်ကယ်လစီယမ် sensitivity ကိုအားဖြင့်ကျုံ့စေနိုငျသော, G-ပရိုတိန်းမှ coupled excitatory receptors ၏ activation မှတဆင့်ဖြစ်ပါတယ်2+ ဒါကလမ်းကြောင်း RhoA, Rho-kinase မြှင့်လုပ်ဆောင်တဲ့သေးငယ် monomeric, G ပရိုတင်းပါဝင်ပတ်သက်။ Rho-kinase phosphorylates activated နှင့်ဖြင့် myofilaments ၏ dephosphorylation တားဆီးချောမွေ့ကြွက်သား myosin phosphatase ၏စည်းမျဉ်း subunit အရှင် (contractile သေံထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်ပုံ 2).33
RhoA / Rho kinase လမ်းကြောင်း: အကယ်လစီယမ်ာင်းလမ်းကြောင်း။
RhoA နှင့် Rho-kinase penile ချောမွေ့ကြွက်သားများတွင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခံရဖို့ပြသခဲ့ကြသည်။34, 35 စိတ်ဝင်စားစရာ RhoA ပမာဏကို 17 သွေးကြောချောမွေ့ကြွက်သားအတွက်ထက်ပိုမိုမြင့်မားခေါက်သည် cavernosal ချောမွေ့ကြွက်သားများတွင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။35 Rhokinase ၏တစ်ဦးရွေးချယ် inhibitor စသည်တို့အတွက်လူ့ Corpus cavernosum ၏အပန်းဖြေထုတ်ယူနိုင်ရန်နှင့်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက် penile စိုက်ထူသွေးဆောင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။36 လွှမ်းမိုးအနုတ်လက္ခဏာ RhoA နှင့်အတူ transfected Anesthetized ကြွက်ထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ပါကတစ်ဦးမွငျ့မားသော erectile function ကိုပြ။37 အဆိုပါထွန်းသစ်စသဘောတူညီမှု penile ချောမွေ့ကြွက်သားများ phasic ကျုံ့ cytosolic Ca တစ်ခုတိုးလာသဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်2+ နှင့်လုပ်သူများကျုံ့ဟာကယ်လစီယမ်အထိခိုက်မခံလမ်းကြောင်းများကအုပ်ချုပ်နေပါတယ်။38
ချောမွေ့ကြွက်သားကျုံ့အတွက် myosin phosphorylation ၏ဗဟိုအခန်းကဏ္ဍအပြင်ခုနှစ်တွင် contractile ပြည်နယ်အခြားယန္တရားများ modulate ဖြစ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဒဏ်ငွေ-ညှိ။ ဥပမာအားဖြင့်, caldesmon ကျုံ့များ၏အင်အားသုံး myosin phosphorylation တစ်ဦးအနိမ့်အဆင့်မှာတစ်ဦးအနိမ့်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်နှင့်အတူထိန်းသိမ်းထားတဲ့အတွက်တံခါးကျင်ပြည်နယ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်ပါသည်။
ကြွက်သားများအပန်းဖြေအခမဲ့ Ca တစ်ကျဆင်းခြင်းအောက်ပါအတိုင်း2+ အဆိုပါ sarcoplasma ၌တည်၏။ Calmodulin ထို့နောက် myosin အလင်း-ကွင်းဆက် kinase ထံမှ dissociates ကြောင့် inactivates ။ myosin myosin အလင်း-ကွင်းဆက် phosphatase အားဖြင့် dephosphorylated နှင့် actin ဝိုင်ယာကြိုးကနေ detaches, နှင့်ကြွက်သားပြေစေပြီးဖြစ်ပါတယ်။32 အခြားသူများကို Corpus cavernosum ချောမွေ့ကြွက်သားအတွင်းရှိမ-cGMP inhibitory လမ်းကြောင်းရိုးရှင်းစွာ excitatory signal ကို transduction ယန္တရားများတစ်ဦးမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်မပေးကြောင်းအကြံပြု; အမည်မသိယန္တရား phosphorylation မှတဆင့် crossbridge စုဆောင်းမှုနှုန်းလျော့ကျလာခြင်းဖြင့်အပန်းဖြေဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မည်။
စခန်းနှင့် cGMP ချောမွေ့ကြွက်သားအပန်းဖြေတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဒုတိယတမန်တို့ကိုဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ (1) ကပိုတက်စီယမ် channel များကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် hyperpolarization အတွက်ရရှိလာတဲ့, အလှည့်များတွင်အချို့သောပရိုတိန်းနှင့်အိုင်းလိုင်းများ phosphorylate ရာ cAMP- နှင့် cGMP-မှီခိုပရိုတိန်း kinases, ကိုသက်ဝင်; အဆိုပါ endoplasmic reticulum အားဖြင့် intracellular ကယ်လစီယမ် (အ 2) sequestration; ကယ်လစီယမ်ရောက်လာပိတ်ဆို့ခြင်းဗို့-မှီခိုကယ်လစီယမ်လိုင်းများနှင့် (3) တားစီး။ အဆိုပါအကျိုးဆက် cytosolic အခမဲ့ကယ်လစီယမ်နဲ့ချောချောမွေ့မွေ့ကြွက်သားအပန်းဖြေ (တစ်တစ်စက်ဖြစ်ပါသည်ပုံ 3).
penile ချောမွေ့ကြွက်သားအပန်းဖြေ၏မော်လီကျူးယန္တရား။ ချောမွေ့ကြွက်သားအပန်းဖြေစခန်းနှင့် cGMP ဖြန်ဖြေအဆိုပါ intracellular ဒုတိယတမန်တို့ကို, ပိုတက်စီယမ်၏အဖွင့်စေအချို့သောပရိုတိန်း phosphorylate ထားတဲ့သူတို့ရဲ့သီးခြားပရိုတိန်း kinases, ကိုသက်ဝင် ...
Erectile အလုပ်မဖြစ်၏ Pathophysiology
အတော်များများကခွဲခြားမှု ED များအတွက်အဆိုပြုခဲ့ကြသည်။ တချို့က (ဆီးချို iatrogenic, စိတ်ထိခိုက်) နှင့် erectile ဖြစ်စဉ်ကို ([သွေးလွှတ်ကြော] ဖြည့်ဖို့ [• Neurogenic disease အာရုံကြော] ပျက်ကွက်အစပျိုးပျက်ကွက်ခြင်း, [သွေးပြန်ကြော] သိမ်းထားဖို့ပျက်ကွက်၏ neurovascular ယန္တရားအပေါ်အချို့သောအကြောင်းရင်းအပေါ်အခြေခံထားတယ်။ တို့ကအကြံပြုတစ်ဦးကခွဲခြား သင်ျခြိုသုတေသနနိုင်ငံတကာလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာပြသတာဖြစ်ပါတယ် စားပွဲတင် 2.39
အမျိုးသား Erectile အလုပ်မဖြစ်၏ခွဲခြား
သင်ျခြိုယောက်ျား၏ 90% ကဤအခွအေနေကနေဆငျးရဲခံရဖို့ထင်နှင့်အတူယခင်က psychogenic ခွန်အားမရှိခြင်း, အသုံးအများဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်ဟုယုံကြည်ခဲ့သည်။40 ဒါဟာယုံကြည်ချက် ED နှင့်အတူပါဆုံးယောက်ျားအများစုအလုပ်လုပ်တဲ့သို့မဟုတ်အများစုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စေမည်အကြောင်းတစ်ဦးရောနှောခွအေနအေရှိသည်သောသဘောပေါက်ဖို့လမ်းပေးထားတယျ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် penile စိုက်ထူသည့် hypothalamus, အ limbic စနစ်, နှင့်ဦးနှောက် cortex ကထိန်းချုပ်ထားရသည်။ ထို့ကြောင့်, stimulatory သို့မဟုတ် inhibitory မက်ဆေ့ခ်ျများစိုက်ထူလွယ်ကူချောမွေ့သို့မဟုတ်တားစီးဖို့ကျောရိုးစိုက်ထူစင်တာများမှလက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ပါသည်။ နှစျခုဖွစျနိုငျသယန္တရားများ psychogenic ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်စိုက်ထူ၏တားစီးရှင်းပြဖို့အဆိုပြုထားပြီ: ပုံမှန် suprasacral တားစီးနှင့်အလွန်အကျွံစာနာထွက်သွားသို့မဟုတ်မြင့်မားသောအရံ catecholamines အဆင့်ဆင့်၏ချဲ့ကားအဖြစ်ဦးနှောက်အားဖြင့်ကျောရိုးစိုက်ထူစင်တာတိုက်ရိုက်တားစီး, penile ချောမွေ့ကြွက်သားကိုတိုးမြှင့်စေခြင်းငှါအရာ စိုက်ထူများအတွက်လိုအပ်သောအပန်းဖြေကာကွယ်တားဆီးဖို့သေံ။41 တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများစာနာအာရုံကြောများနှိုးဆွသို့မဟုတ် epinephrine ၏စနစ်တကျပြုတ်ရည်ဟာစိုက်ထူလိင်တံ၏ detumescence ဖြစ်စေသောဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။42, 43 Clinic, သွေးရည်ကြည် norepinephrine ၏အဆင့်မြင့် vasculogenic ED နှင့်အတူပုံမှန်ထိန်းချုပ်မှုသို့မဟုတ်လူနာထက် psychogenic ED နှင့်အတူလူနာအစီရင်ခံခြင်းဖြစ်သည်။44
Bancroft နှင့် Janssen အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု CNS အတွင်း excitatory နှင့် inhibitory Impulses သတင်းပို့အကြားချိန်ခွင်လျှာပေါ်တွင်မူတည်ကြောင်းဆိုခဲ့။45 သူတို့တစ်တွေလူနာ psychotherapy နှင့်အတူသို့မဟုတ် pharmacologic ကုသမှုနှင့်အတူတစ်ဦးထက်ပိုအောင်မြင်တဲ့ရလဒ်ရလိမ့်မည်ဟုတ်မဟုတ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ကူညီစေခြင်းငှါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ inhibitory နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ excitatory မေးခွန်းစမ်းသပ်နေကြသည်။
• Neurogenic disease အာရုံကြော
ဒါဟာ 10 • Neurogenic disease အာရုံကြောမူရင်းဖြစ်ပါသည် ED ၏% 19 မှခန့်မှန်းထားသည်။46, 47 တဦးတည်း iatrogenic အကြောင်းရင်းများနှင့်ရောထွေး ED ပါဝင်သည်လြှငျ, • Neurogenic disease အာရုံကြော ED ၏ပျံ့နှံ့မှုဖြစ်ကောင်းအများကြီးပိုမိုမြင့်မားသည်။ တစ်ဦးအာရုံကြောရောဂါသို့မဟုတ် neuropathy ၏ရှေ့မှောက်တွင်သည်အခြားအကြောင်းတရားများကိုဖယ်ထုတ်မထားဘူးသော်လည်း, ED ဇာစ်မြစ်များတွင်• Neurogenic disease အာရုံကြောကြောင်းအတည်ပြုစိန်ခေါ်မှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုစိုက်ထူတစ် neurovascular ဖြစ်ရပ်ကြောင့်, ဦးနှောက်, ကျောရိုး, လိုဏ်ဂူနှင့် pudendal အာရုံကြောထိခိုက်မည်သည့်ရောဂါသို့မဟုတ်ကမောက်ကမဖြစ်မှုကမောက်ကမဖြစ်မှုသွေးဆောင်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ MPOA, အ paraventricular နျူကလိယကို၎င်း, hippocampus လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Drive နှင့် penile စိုက်ထူများအတွက်အရေးကြီးသောပေါင်းစည်းမှုစင်တာများအဖြစ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။48 ထိုကဲ့သို့သောပါကင်ဆန်ရောဂါ, လေဖြတ်ခြင်း, encephalitis, ဒါမှမဟုတ်ယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေးဝက်ရူးပြန်ရောဂါအဖြစ်ကဤဒေသများတွင်ရောဂါဗေဒလုပ်ငန်းစဉ်များ, မကြာခဏ ED နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ပါကင်ဖွင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုဟာ dopaminergic လမ်းကြောင်း၏မညီမမျှကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နိုင်ပါသည်။49 ဦးနှောက်မှာရှိတဲ့တခြားကိုတွေ့ရှိရပါသည် ED နှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့မှတ်ချက်ပြုမြင်းသရိုက်ပုံ, စိတ်ဖောက်ပြန်, အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ, ရှက်-Drager syndrome ရောဂါနှင့်စိတ်ဒဏ်ရာဖြစ်ကြသည်။
တစ်ဦးကျောရိုးဒဏ်ရာနှင့်အတူလူတို့သည်အတွက်, သူတို့ရဲ့ erectile function ကိုသဘောသဘာဝ, တည်နေရာ, နှင့်ကျောရိုးကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏အတိုင်းအတာအပေါ်အကြီးအကျယ်မူတည်ပါသည်။ ပညာရေးအပြင်သူတို့သည်လည်းသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်ချို့ယွင်းကြပေမည်။ ပြီးပြည့်စုံသောအနိမ့်ကြိုးကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတူသူတို့၏အမျိုးအခန့်သာ 95% တစ်ခုစိုက်ထူအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်သော်လည်း Reflexogenic စိုက်ထူ, ပြည့်စုံသောအထက်ကြိုးကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတူလူနာ 25% အတွက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။50 ဒါဟာ sacral parasympathetic အာရုံခံ reflexogenic စိုက်ထူ၏ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်အရေးကြီးလှသည်ပုံရသည်။ သို့သော် thoracolumbar လမ်းကြောင်း Synaptic ဆက်သွယ်မှုမှတဆင့် sacral ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်လျော်ကြေးပေးပေမည်။10 ဒီလူမှာတော့အနည်းငယ်မျှသာထိတွေ့နိုင်သောဆွစိုက်ထူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စဉ်ဆက်မပြတ်ဆွလိုအပ်တိုကြာချိန်၏ဆိုသော်ငြားစိုက်ထူဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါကျောရိုးအဆင့် (ဥပမာ spina bifida, disc ကို herniation, syringomyelia, အကျိတ်, transverse myelitis နှင့်မျိုးစုံနဗ်ကြော) မှာကတခြားပုံမမှန်သည့် afferent တစ်ခုသို့မဟုတ်အလားတူထုံးစံအတွက် efferent အာရုံကြောလမ်းကြောင်းကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လိုဏ်ဂူအာရုံကြောနှင့်တင်ပါးဆုံတွင်းအင်္ဂါများအကြားအနီးကပ်ဆက်ဆံရေး, ဤကိုယ်တွင်းအင်္ဂါပေါ်ခွဲစိတ်ခွန်အားမရှိခြင်းတစ်မကြာခဏအကြောင်းမရှိဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းအမျိုးမျိုးသောလုပျထုံးလုပျနညျးအနေဖြင့် iatrogenic ခွန်အားမရှိခြင်း၏ဖြစ်ပွားမှုအစီရင်ခံထားပါတယ်:% 43 မှအစွန်းရောက် prostatectomy, 100%; ညင်သာပျော့ပျောင်းရောဂါ, 29% များအတွက် perineal prostatectomy; % 15 မှဝမ်းဗိုက် perineal ဆိုင်ရာပါရဂူကျမ်းပြုစု, 100%; နှင့် 3- နှင့် 9-နာရီလောက်မှာရာထူးမှာပြင်ပ sphincterotomy, 2%% 49 ရန်။51-56
ယင်းတင်ပါးဆုံတွင်းနှင့်လိုဏ်ဂူအာရုံကြောများ၏ neuroanatomy တစ်ခုတိုးတက်လာသောနားလည်မှု iatrogenic ခွန်အားမရှိခြင်း၏အောက်ပိုင်းဖြစ်ပွားမှုကိုထုတ်လုပ်စအိုလမ်းကြောင်းကင်ဆာ, ဆီးအိမ်နှင့်ဆီးကျိတ်အဘို့ပြုပြင်ထားသောခွဲစိတ်မှုခဲ့သည်။53 ဥပမာအားဖြင့်, အာရုံကြော-ကြဲအစွန်းရောက် prostatectomy ၏နိဒါန်း 100-30% နီးပါး 50% ကနေခွန်အားမရှိခြင်း၏ဖြစ်ပွားမှုလျှော့ချခဲ့သည်။57, 58 အစွန်းရောက်တင်ပါးဆုံတွင်းခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက် erectile function ကို၏ပြန်လည်နာလန်ထူ6လ 24 ယူနိုင်ပါတယ်။ intracavernous alprostadil သို့မဟုတ်ပါးစပ် sildenafil နှင့်အတူအစောပိုင်းကုသမှု erectile function ကို၏ပြန်လည်နာလန်ထူတိုးတက်စေရန်ပြသခဲ့ကြသည်။59, 60 ဒါဟာ pharmacologically- သွေးဆောင်စိုက်ထူအာရုံကြောပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလအတွင်းခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောသို့မဟုတ်လုံးဝမစိုက်ထူနှင့်အတူဆက်စပ်တည်ဆောက်ပုံတစ်ရှူးအပြောင်းအလဲများကိုတားဆီးကြောင်းယုံကြည်ရသည်။
တင်ပါးဆုံတွင်းကျိုး၏ကိစ္စများတွင် ED လိုဏ်ဂူအာရုံကြောဒဏ်ရာသို့မဟုတ်သွေးကြောမလုံလောက်သို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံး၏ရလဒ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရင့်ကျက်ကြွက်များတွင်တိရစ္ဆာန်စမ်းသပ်မှုများတွင်အရက်, ဗီတာမင်ချို့တဲ့ခြင်း, သို့မဟုတ်ဆီးချိုရောဂါတွင်းအာရုံကြောဆိပ်ကမ်းကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါနှင့် neurotransmitters ၏ချို့တဲ့ခြင်းဖြစ်ပေါ်စေမည်။ ဆီးချိုရောဂါအတွက်, လုံလောက်မှုမရှိ NO လွှတ်ပေးရန်အတွက်• Neurogenic disease အာရုံကြောနှင့် endothelium-မှီခိုအပန်းဖြေရလဒ်များချို့ယွင်း။4 လိင်တံ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ innervation စမ်းသပ်ဖို့အဘယ်သူမျှမတိုက်ရိုက်နည်းလမ်းရှိသေး၏သောကြောင့်, Clinician • Neurogenic disease အာရုံကြော ED ၏ရောဂါရာတွင်သတိထားရပါမည်။ penile ခန္နမူနာအတွက် NANC အာရုံကြောအမျှင်၏ NADPH diaphorase အစွန်းအထင်း• Neurogenic disease အာရုံကြော status ကိုတစ်ဦးညွှန်ပြချက်အဖြစ်အဆိုပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။61 Stief နှင့်အပေါင်းအသင်းလည်းလိုဏ်ဂူအာရုံကြော function ကို၏အကဲဖြတ်ဘို့လိုဏ်ဂူလျှပ်စစ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတည်းအလားအလာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတင်ပြသည်။62 ဤအစမ်းသပ်မှုလက်တွေ့လက်တွေ့တွင်ပုံမှန်သုံးနိုငျမတိုင်မီနောက်ထပ်လေ့လာမှုများလိုအပ်နေပါသည်။
Bemelmans နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များအဘယ်သူမျှမဆေးခန်းပေးခြင်းအာရုံကြောရောဂါနှင့်အတူသင်ျခြိုလူနာအပေါ်အလားအလာများနှင့် sacral တုံ့ပြန်မှု latency evoked နှင့် 47% အနည်းဆုံးပုံမှန်မဟုတ်သော neurophysiologic တိုင်းတာခြင်းခဲ့ကာမူမမှန်အဟောင်းတွေလူနာအတွက်ပိုပြီးမကြာခဏတွေ့သောတွေ့ရှိခဲ့ somatosensory ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။63 တိုးမြှင့်အသက်အရွယ်နှင့်အတူ penile ထိတွေ့နိုင်သော sensitivity ကိုတစ်ဦးကျဆင်းခြင်းလည်း Rowland နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအားဖြင့်အစီရင်ခံခဲ့သည်။64 အဆိုပါမအင်္ဂါကနေအာရုံခံ input ကို reflexogenic စိုက်ထူရရှိနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဖြစ်တယ်, သက်ကြီးရွယ်အိုတဖြည်းဖြည်း psychogenic စိုက်ထူဆုံးရှုံးအခါ input ကို ပို. ပင်အရေးကြီးသောဖြစ်လာသည်။ ထို့ကြောင့်, အာရုံခံအကဲဖြတ်နှင့်အတူသို့မဟုတ်တစ်ခုသိသာအာရုံကြောရောဂါမရှိဘဲအားလုံးလူနာအတွက်ပညာရေးများအတွက်အကဲဖြတ်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သင့်သည်။
Hypogonadism အဆိုပါသင်ျခြိုလူဦးရေအတွက်-ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောမဟုတ်တွေ့ရှိချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အန်ဒရိုဂျင်ယောက်ျားမျိုးပွားကျေးရွာအုပ်စုနှင့်အလယ်တန်းလိင်ဝိသေသလက္ခဏာများ၏တိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်သြဇာလွှမ်းမိုး; လိင်စိတ်နဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုကိုကောင်းစွာထူထောင်လျက်ရှိသည်။ 1975 မှ 1992 ကနေပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဆောင်းပါးပြန်လည်သုံးသပ်ခုနှစ်, Mulligan နှင့် Schmitt ကောက်ချက်ချ: (1) testosterone ဟော်မုန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုတိုးမြှင့်; (2) testosterone ဟော်မုန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုမူသောအမှုအကြိမ်ရေတိုးပွါး; နှင့် (3) testosterone ဟော်မုန်း nocturnal စိုက်ထူ၏ကြိမ်နှုန်းတိုးပွါးပေမယ့်စိတ်ကူးယဉ်-သွေးဆောင်သို့မဟုတ်အမြင်အာရုံသွေးဆောင်စိုက်ထူအပေါ်အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမသက်ရောက်ပါတယ်။65 အမျိုးသားများတွင် nocturnal စိုက်ထူခြင်းနှင့် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့် correlating တစ်ဦးကလေ့လာမှု, သာမန် nocturnal စိုက်ထူများအတွက်တံခါးခုံ 200 ng / dl နှင့် ပတ်သက်. ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။66 အနိမ့်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းနှင့်အတူယောက်ျားအဆင့်ဆင့်မကြာခဏ testosterone ဟော်မုန်းပုံမှန်အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပုံမှန်မဟုတ်သော nocturnal စိုက်ထူ parameters တွေကိုရှိသည်။ သို့သော်နယ်စပ်ဒေသအနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူသင်ျခြိုယောက်ျားအတွက် exogenous testosterone ဟော်မုန်းကုထုံးသတင်းများအရအာနိသင်အပေါ်အနည်းငယ်သာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။67
အများအပြားကစုံစမ်းစစ်ဆေးအန်ဒရိုဂျင်ရဲ့သက်ရောက်မှု၏ယန္တရားဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ Beyer နှင့် Gonzales-Mariscal Testosterone နဲ့ dihydrotestosterone သုတ်ရည်ထိကာလအတွင်းအမျိုးသမီးတင်ပါးဆုံတွင်းထိုးဘို့အထီးတင်ပါးဆုံတွင်းထိုးခြင်းနှင့် estradiol သို့မဟုတ် testosterone ဟော်မုန်းတာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်ပါပြီ။68 ကြွက်များတွင်သင်း, သွေးလွှတ်ကြောစီးဆင်းမှုလျော့ကျသွေးပြန်ကြောယိုစိမ့်သွေးဆောင်သဖြင့်, လိုဏ်ဂူအာရုံကြောများနှိုးဆွဖို့ erectile တုံ့ပြန်မှု၏ထက်ဝက်ခန့်လျှော့ချရန်အစီရင်ခံခဲ့သည်။69, 70 သင်းအပြင် flutamide, estradiol, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦး gonadotropin-releasing ဟော်မုန်းရန်နှင့်အတူကုသမှုနောက်ထပ် erectile တုံ့ပြန်မှု depresses ။ penile NOS လှုပ်ရှားမှုသည်ဤတိရိစ္ဆာန်များအတွက်လျှော့ချပေမဲ့, အာရုံခံ NOS (nNOS) နှင့် endothelial NOS (ဧနုတ်သည်) ရဲ့ contents သိသိသာသာကုသမှုလျှော့ချကြသည်မဟုတ်။ သင်းကိုလည်း penile ချောမွေ့ကြွက်သားများα-adrenergic တုန့်ပြန်တိုးပွါးအတွက်ကြွက်များတွင် Corpus cavernosum အတွက် apoptosis တိုးပွါးနှင့်ယုန်အတွက် trabecular ချောမွေ့ကြွက်သားအကြောင်းအရာလျော့နည်းစေသည်။71-73 Clinic, ဆီးကျိတ်ကင်ဆာများအတွက်ရေရှည်အန်ဒရိုဂျင် ablation ကုထုံးအပေါ်လူအများတို့သည်ဆင်းရဲသားတို့ကိုလိင်စိတ်နဲ့ ED အစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ။
အဆိုပါ hypothalamic-pituitary ဝင်ရိုးမဆိုကမောက်ကမဖြစ်မှု hypogonadism ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ Hypogonadotropic hypogonadism မွေးရာပါတစ်ခုသို့မဟုတ်အကျိတ်သို့မဟုတ်ဒဏ်ရာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နိုင်ပါတယ်; hypergonadotropic hypogonadism အဆိုပါ testis, ဒါမှမဟုတ်ပါးချိတ်ရောင် orchitis တစ်ဦးအကျိတ်, ဒဏ်ရာသို့မဟုတ်ခွဲစိတ်ကုသရာမှဖြစ်ပေါ်စေမည်။
Hyperprolactinemia တစ် pituitary adenoma သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများကနေဖြစ်စေ, မျိုးဆက်ပွားနှင့်လိင်နှစ်ဦးစလုံးကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်ရလဒ်များ။ ရောဂါလက္ခဏာများလိင်စိတ်, ED, galactorrhea, gynecomastia နှင့်မျိုးမပွားနိုင်ခြင်း၏ဆုံးရှုံးမှုပါဝင်နိုင်သည်။ Hyperprolactinemia ပုခြီးမွှောကျ prolactin အဆင့်ဆင့်အားဖြင့် gonadotropin-releasing ဟော်မုန်း Secret ၏တားစီးဖို့အလယ်တန်းဖြစ်ပေါ်လာရသော testosterone ဟော်မုန်း၏အနိမ့်ပျံ့နှံ့နေတဲ့အဆင့်နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။74
ပညာရေးကိုလည်း hyperthyroid နှင့် hypothyroid ပြည်နယ်နှစ်ခုလုံးနှင့်ဆက်စပ်နိုင်ပါသည်။ Hyperthyroidism လေ့တိုးမြှင့်ပျံ့နှံ့နေတဲ့အီစရိုဂျင်အဆင့်ဆင့်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နှင့်လျော့နည်းမကြာခဏ ED နှင့်အတူစေခြင်းငှါအရာမှိန်ဖျော့လိင်စိတ်, နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ hypothyroidism ခုနှစ်တွင်အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းလျှို့ဝှက်ချက်နှင့်အမွငျ့မား prolactin အဆင့်ဆင့် ED မှကူညီသည်။
atherosclerotic ဒါမှမဟုတ် hypogastric-လိုဏ်ဂူ-helicine သည်သွေးလွှတ်ကြောသစ်ပင်အရှင်အကျယ်ချဲ့စိုက်ထူဖို့အချိန်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်စိုက်ထူလိင်တံ၏ကျောမှုလျော့ကျလာသည် sinusoidal နေရာများဖို့ perfusion ဖိအားနှင့်သွေးလွှတ်ကြောစီးဆင်းမှုလျော့နည်းကျဆင်းနိုင်ပါတယ်၏စိတ်ထိခိုက်သည်သွေးလွှတ်ကြော occlusive ရောဂါ။ arteriogenic ED နှင့်အတူလူနာအများစုမှာချို့ယွင်း penile perfusion အထွေထွေ atherosclerotic လုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မိခါလသည်နှင့် Ruzbarsky ဖြစ်ပွားမှုများနှင့်အသက်အရွယ်သွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါစတင်ခြင်းမှာ ED အပြိုင်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။75 သွေးလွှတ်ကြောမလုံလောက်နဲ့ဆက်စပ်ဘုံအန္တရာယ်အချက်များသွေးတိုးရောဂါ, hyperlipidemia, စီးကရက်ဆေးလိပ်မသောက်, များတွင်ဆီးချိုရောဂါ, တုံး perineal သို့မဟုတ်တင်ပါးဆုံတွင်းစိတ်ဒဏ်ရာနှင့်တင်ပါးဆုံတွင်း irradiation ပါဝင်သည်။76-78 Shabsigh နှင့်အပေါင်းအသင်း ED များအတွက်အန္တရာယ်အချက်များ၏နံပါတ်စဉ်အတိုင်းတိုးတက်ပုံမှန်မဟုတ်သော penile သွေးကြောတွေ့ရှိချက်သိသိသာသာတိုးပွားလာကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။79 arteriography တွင်ပြည်တွင်းရေး pudendal, ဘုံ penile နှင့်လိုဏ်ဂူသွေးလွှတ်ကြောများ၏နှစ်နိုင်ငံပျံ့ရောဂါသွေးကြောနှင့်အတူသင်ျခြိုလူနာမှာတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘုံ penile သို့မဟုတ်လိုဏ်ဂူသွေးလွှတ်ကြောများ၏ focal stenosis အများဆုံးမကြာခဏတုံးတင်ပါးဆုံတွင်းသို့မဟုတ် perineal စိတ်ဒဏ်ရာကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်ကြသူလူငယ်တစ်လူနာတွင်တွေ့မြင်ဖြစ်ပါတယ်။77 long-အကွာအဝေးစက်ဘီးစီးခြင်းကိုလည်း vasculogenic နှင့်• Neurogenic disease အာရုံကြော ED များအတွက်အန္တရာယ်အချက်တခုဖြစ်ပါသည်။80, 81
တဦးတည်းအစီရင်ခံစာများတွင်ဆီးချိုယောက်ျားနှင့်အထက်လူတို့သညျရငျးနှီးပြန့်ပွား, calcification နှင့်တောက်ပ stenosis နှင့်တကွ, လိုဏ်ဂူသွေးလွှတ်ကြောများ၏ fibrotic ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏မြင့်မားဖြစ်ပွားမှုရှိခဲ့သည်။75 နီကိုတင်းဆိုးရွားစွာလိင်တံမှသွေးလွှတ်ကြောစီးဆင်းမှုကျဆင်းခြင်းဖြင့်ဒါပေမယ့်လည်း Corporation ချောမွေ့ကြွက်သားအပန်းဖြေပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်အရှင်ပုံမှန်သွေးပြန်ကြော occlusive ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းဖြင့်သာ erectile function ကိုထိခိုက်စေလိမ့်မည်။82, 83
Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါရှယ်ယာထိုကဲ့သို့သောသွေးတိုး, ဆီးချို, hypercholesterolemia နှင့်ဆေးလိပ်သောက်ကဲ့သို့တူညီသောအန္တရာယ်အချက်များ။ 84, 85အဆိုပါ pudendal သွေးလွှတ်ကြောများတွင်တွေ့ရှိရပါသည်အလားတူအသက်ယေဘုယျလူဦးရေအတွက်ထက်သင်ျခြိုယောက်ျားအတွက်အများကြီးပိုပြီးဘုံဖြစ်ကြသည်။86 ထို့ကြောင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု generalized သို့မဟုတ် focal သည်သွေးလွှတ်ကြောရောဂါတစ်ပေါ်ထွန်းခြင်းနိုင်ပါတယ်။87
Arteriogenic ED ၏ယန္တရား
1 ။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအပြောင်းအလဲများ
မလုံလောက် arterial ကြောင့် ED ခုနှစ်, Corpus cavernosum သွေးထဲမှာအောက်စီဂျင်တင်းမာမှုအတွက်ကျဆင်းခြင်း psychogenic ED နှင့်အတူလူနာတိုင်းတာကြောင်းနှိုင်းယှဉ်ရှိသေး၏။88 PGE1 နှင့် PGE2 ဖွဲ့စည်းရေးအောက်စီဂျင်-မှီခိုဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကအောက်စီဂျင်တင်းမာမှုတစ်ခုတိုး PGE2 ၏မြင့်နှင့်ယုန်နှင့်လူ့ Corpus cavernosum အတွက် TGF-β1-သွေးဆောင်ကော်လာဂျင်ပေါင်းစပ်၏ဖိနှိပ်မှုနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။89, 90 ပြောင်းပြန်အောက်စီဂျင်တင်းမာမှုအတွက်ကျဆင်းခြင်းလိုဏ်ဂူ trabecular ချောမွေ့ကြွက်သားအကြောင်းအရာလျော့ခြင်းနှင့်သွေးပြန်ကြောယိုစိမ့် diffuse ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်။91, 92
အဆိုပါသွေးကြောထဲမှာအချိုး lumen မှတစ်ဦးကကျဉ်း lumen သို့မဟုတ်တိုးမြှင့်မြို့ရိုးကိုသွေးတိုးရောဂါအတွက်တိုးလာရံသွေးကြောခုခံစေတယ်။93 တစ်ခုတိုးလာခုခံလည်းကောက်ကာငင်ကာသွေးတိုးရောဂါကြွက် (SHR) ၏ penile vasculature ၌တွေ့, ဤပွောငျးလဲသည့်သွေးလွှတ်ကြောများနှင့် erectile တစ်ရှူးများ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပြောင်းလဲ ascribed ခဲ့ကြသည်။94-96 extracellular matrix ကိုချဲ့ထွင်မှုအတွက်တိုး interstitium နှင့်လိင်တံ၏အာရုံကြောအဆောက်အဦနှစ်ခုလုံးကိုသက်ရောက်သည်။
2 ။ Vasoconstriction
Enhanced Basal နှင့် myogenic သေံသွေးတိုးရောဂါကြွက်များကနေသွေးလွှတ်ကြောများတွင်ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့သည်။ Enhanced စာနာအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုသွေးတိုးရောဂါလည်းလူနှင့်သွေးတိုးရောဂါတိရိစ္ဆာန်များအစီရင်ခံထားပါတယ်အတူ။97, 98 phenylephrine ၏ပြုတ်ရည်များကသွေးဆောင် SHR အတွက် penile vasculature ၏တိုးမြှင် vasoconstriction သွေးကြောထရံ hypertrophy သော်လည်းမစာနာ neurotansmitters ၏အပြောင်းအလဲတချို့မှစွပ်စွဲခဲ့သည်။94
3 ။ ချို့ယွင်း Endothelium-မှီခို Vasodilatation
မရှိမဖြစ်သွေးတိုးရောဂါနှင့်အတူလူနာများတွင်ထိုကဲ့သို့သော acetylcholine, bradykinin, ဒါမှမဟုတ်စီးဆင်းမှုအဖြစ် agonists ၏ပြုတ်ရည်များကရူးနှမ်း endothelium-မှီခို vasodilatation, လျော့နေသည်။99-101 မကြာသေးမီကအထောက်အထားများအသွေးကြောဆိုင်ရာစောင်ရေအတွက်လေးနက် endothelial ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုအဓိကသွေးကြောဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်မဖော်ပြသည်။102, 103 ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေ acetylcholine-သွေးဆောင် vasorelaxation အဖြစ်တိုင်းတာ Endothelial ကမောက်ကမဖြစ်မှု renovascular သွေးတိုးရောဂါနှင့်အတူလူနာထံမှသေးငယ်တဲ့သွေးကြောထဲမှာထငျရှားပါသညျ။104, 105 သို့သော်သွေးတိုးရောဂါယောက်ျားအတွက် penile endothelial function ကို၏လေ့လာမှုတစ်ခုမရှိခြင်းလည်းမရှိ။
အဆိုပါ SHR ခုနှစ်, acetylcholine များ၏လျှော့ပေါ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကြီးမားနှင့်အသေးစားသွေးလွှတ်ကြောများတွင်နှစ်ဦးစလုံးကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေနှင့် endothelial ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြစ်ပါတယ်သွေးတိုးရောဂါ၏အသွင်အပြင်နှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပုံပေါ်ပါတယ်။106 acetylcholine အားဖြင့် evoked Endothelium-မှီခိုအပန်းဖြေလည်း SHR ကနေတပ်ကြပ် strips တွေအတွက်ချို့ယွင်းလျက်ရှိသည်နှင့်ဤလျော့ပေးခြင်း indomethacin ၏ရှေ့တော်၌ပွနျလညျထူထောငျကွသညျ။107 endothelium-မှီခိုအပန်းဖြေ၏ချွတ်ယွင်းနှုန်း se SHR သို့မဟုတ်မြင့်မားသောသွေးဖိအားကနေသွေးလွှတ်ကြောများတွင် angiotensin II ကို thromboxane နှင့် superoxide မှ ascribed နိုငျသညျ။108-112
လုံလောက်သောသွေးပြန်ကြော occlusive ၏ပျက်ကွက် vasculogenic ခွန်အားမရှိခြင်း၏အသုံးအများဆုံးအကြောင်းတရားများတစ်ဦးအဖြစ်အဆိုပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။113 Veno-occlusive ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုအောက်ပါ pathophysiologic ဖြစ်စဉ်များကနေဖြစ်ပေါ်စေမည်:
အဆိုပါ corpora cavernosa ဖျန်ကြီးမားသောသွေးပြန်ကြောလမ်းကြောင်းများ၏ရှေ့မှောက်တွင်သို့မဟုတ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။
ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာအပြောင်းအလဲများကို (Peyronie ရဲ့ရောဂါ, အသက်ကြီးနှင့်ဆီးချိုရောဂါ) သို့မဟုတ် subtunical နှင့်သံတမန်များသွေးပြန်ကြောများ၏မလုံလောက်တဲ့ compression အတွက်ရရှိလာတဲ့အတွက် Tunica albuginea (penile ကျိုး) အားစိတ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာ။ Peyronie ရဲ့ရောဂါမှာ inelastic Tunica albuginea ပိတ်ပွဲကနေသံတမန်များသွေးပြန်ကြောတားဆီးနိုငျသညျ။114 Iacono နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအတွက် Tunica albuginea အတွက် elastic အမျှင်တစ်ဦးကျဆင်းခြင်းနှင့် microarchitecture တစ်ခုအပြောင်းအလဲတချို့တချို့ယောက်ျားအတွက်ခွန်အားမရှိခြင်းအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါ postulated ပါပြီ။115, 116 အဆိုပါ subtunical areolar အလွှာတွင်အပြောင်းအလဲများရံဖန်ရံခါ Peyronie ရဲ့ရောဂါခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်လူနာတွင်တွေ့မြင်အတိုင်း, veno-occlusive ယန္တရားအယှက်ဖြစ်နိုင်သည်။117
ထို trabeculae ၏ fibroelastic အစိတ်အပိုင်းများ, လိုဏ်ဂူချောမွေ့ကြွက်သားများနှင့် endothelium အတွက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုပြောင်းလဲသွေးပြန်ကြောယိုစိမ့်မှုဖြစ်နိုင်သည်။
မလုံလောက် sinusoidal ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် subtunical venules ၏မလုံလောက်တဲ့ compression ဖြစ်စေတဲ့မလုံလောက် trabecular ချောမွေ့ကြွက်သားအပန်းဖြေ, အလွန်အကျွံ adrenergic သေံနှင့်အတူသို့မဟုတ်မလုံလောက် neurotransmitter လွှတ်ပေးရန်နှင့်အတူလူနာအတွက်တစ်ဦးစိုးရိမျတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဒါဟာတစ်ဦးα adrenoceptor သို့မဟုတ် NO လွှတ်ပေးရန်အတွက်ကျဆင်းခြင်းချောကြွက်သားသေံအရှိန်မြင့်နှင့် endogenous ကြွက်သားအပန်းဖြေဖို့တုံ့ပြန်မှုအတွက်အပန်းဖြေအယှက်ဖြစ်နိုင်သည်၏အပြောင်းအလဲတချို့ပြသလျက်ရှိသည်။118
Acquired သွေးပြန်ကြော shunt - priapism ၏စစ်ဆင်ရေးဆုံးမခြင်း၏ရလဒ် - မြဲ glans / cavernosum သို့မဟုတ် cavernosum / spongiosum shunting ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ကော်လာဂျင်၏တိုးလာအစစ်ခံနှင့်အတူဆက်စပ် penile sinusoids ၏လိုက်နာမှုဆုံးရှုံးမှုများနှင့် elastic အမျှင်လျော့နည်းသွားဆီးချို, hypercholesterolemia, သွေးကြောရောဂါ, penile ဒဏ်ရာ, ဒါမှမဟုတ်ဟောင်းနွမ်းအသက်အရွယ်တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။119, 120 သွေးလွှတ်ကြောရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက်9သာမန်လူ%, သွေးပြန်ကြောယိုစိမ့်နှင့်အတူလူနာအတွက် 5.1% နှင့် 4.3%: Sattar နှင့်လုပ်ဖော်လိင်တံအတွက် elastic အမျှင်များယုတ်ရာခိုင်နှုန်းအတွက်သိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ကဖော်ပြခဲ့သည်။121 vasculogenic ED ၏တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်မှာတော့ Nehra နှင့်အပေါင်းအသင်း cavernosal ချဲ့ထွင်ချောမွေ့ကြွက်သားအကြောင်းအရာနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်နှင့် trabecular တစ်သျှူးဆိုင်ရာဘာသာရပ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့အသုံးပြုစေခြင်းငှါသရုပ်ပြခဲ့သည်။92 Moreland နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကြောင့် Prostaglands လုပ်လိုက်တာ E ကိုပြသကြ1 E1 တစ်ပြိုင်တည်း၏ intracavernous ဆေးထိုး intracavernous fibrosis တားဆီးအတွက်အကျိုးရှိသောဖြစ်မည်အကြောင်းဆိုလိုရာလူ့လိုဏ်ဂူချောမွေ့ကြွက်သားအတွက် growth factor-β1ပြောင်းလဲနေဖြင့်ကော်လာဂျင်ပေါင်းစပ်ဖိနှိပ်။89
Corporate ချောမွေ့ကြွက်သားစိုက်ထူရန်ဦးဆောင်သည့်သွေးကြောဖြစ်ရပ်ထိန်းချုပ်သောကြောင့်, ချောမွေ့ကြွက်သားအကြောင်းအရာနှင့် ultrastructure ၏ပြောင်းလဲမှု erectile တုံ့ပြန်မှုကိုထိခိုက်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ antidesmin (လူ့ penile တစ်ရှူး၏လေ့လာမှုတစ်ခုမှာတော့ Sattar နှင့်အပေါင်းအသင်း antidesmin (38.5%) သို့မဟုတ် antiactin (45.2%) နှင့်အတူစွန်းပုံမှန်အစွမ်းထက်ယောက်ျားအတွက်လိုဏ်ဂူချောမွေ့ကြွက်သား၏ယုတ်ရာခိုင်နှုန်းအကြားသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်သရုပ်ပြများနှင့်သွေးပြန်ကြောအုပ်စုကြောင်း , 27.4%; antiactin, 34.2%) ဒါမှမဟုတ် arteriogenic အုပ်စုသည် (antidesmin, 23.7%, antiactin, 28.9%) ။121 တစ်ဦးအတွက်စသည်တို့ထဲကဓာတုပစ်စညျးလေ့လာမှုချို့ယွင်း• Neurogenic disease အာရုံကြောနှင့်သင်ျခြိုဆီးချိုယောက်ျားအတွက် penile ချောမွေ့ကြွက်သားများ endothelium-related အပန်းဖြေပြသခဲ့သည်။4 vasculogenic နှင့်• Neurogenic disease အာရုံကြော ED မှာပျက်စီးချောမွေ့ကြွက်သားမူလတန်းအကြောင်းမရှိ aggravating တစ်သော့ချက်အချက်နိုင်ပါတယ်။122 Pickard နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုလည်းအာရုံကြော-evoked အပန်းဖြေခြင်းနှင့်လိုဏ်ဂူကြွက်သားများα-adrenergic-နှိုးဆွကျုံ့အဖြစ်သွေးပြန်ကြောသို့မဟုတ်ရောနှောသွေးပြန်ကြော / သွေးလွှတ်ကြောခွန်အားမရှိခြင်းနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်လျှော့ချကြွက်သားအကြောင်းအရာချို့ယွင်းပြသခဲ့ကြသည်။123
ion channel များကိုကြွက်သား function ကို၏ထဲကဓာတုပစ်စညျးဖြစ်ရပ်များအတွက်ရငျးနှီးပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အိုင်းလိုင်းများတစ်ခုအပြောင်းအလဲတချို့ကြွက်သား function ကိုအပေါ်အများကြီးအကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ ပန်ကာများနှင့်အပေါင်းအသင်းတို့သည် Maxi-K သည်တစ်ဦးအပြောင်းအလဲတချို့အစီရင်ခံတင်ပြ+ သင်ျခြိုလူနာထံမှဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ရုပ်သံလိုင်းနှင့်ပိုတက်စီယမ်လိုင်းများရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်သို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်ချွတ်ယွင်းသည့်လျော့နည်းသွား hyperpolarizing နိုင်စွမ်းပြောင်းလဲကယ်လစီယမ် homeostasis နှင့်ခွန်အားမရှိခြင်းလူနာအတွက်ချို့ယွင်းချောမွေ့ကြွက်သားအပန်းဖြေဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေအံ့သောငှါအကြံပြုသည်။124 တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများမှာတော့ Junemann နှင့်အပေါင်းအသင်းယုန်အတွက်ဆဲလ်-to-ဆဲလ်အဆက်အသွယ်ဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူသိသိသာသာချောမွေ့ကြွက်သားယိုယွင်း3လကြာမြင့်လက်စထရောဓာတ်စာကျွေးမွေးပြသခဲ့သည်။82 vasculogenic ခွန်အားမရှိခြင်း၏ယုန်မော်ဒယ်မှာတော့ Azadzoi နှင့်အပေါင်းအသင်း veno-occlusive ကမောက်ကမဖြစ်မှု cavernosal ischemia အားဖြင့်သွေးဆောင်ခံရနိုင်ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။125
သူတို့ရဲ့ pathophysiologic သက်ရောက်မှုရှင်းလင်းခံရဖို့မရှိသေးပါပေမယ့်ဒါတွေက intercellular ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း, အညှိများနှင့်ညှိနှိုင်း erectile တုံ့ပြန်မှုတာဝန်ရှိသည်။126, 127 ပြင်းထန်သောသွေးလွှတ်ကြောရောဂါများတွင်အမြှေးပါးအဆက်အသွယ်တစ်ဦးဆုံးရှုံးခြင်းသို့မဟုတ်လျှော့ချရေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆယ်လူလာအမြှေးပါးအကြားကော်လာဂျင်အမျှင်၏ရှေ့မှောက်တွင်၏ရူပါရုံကိုမြင်သည်။128 ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ကွာဟမှုဆုံတဲ့ချွတ်ယွင်းသို့မဟုတ်အရှုံးအတွက်ညှိနှိုင်းချောမွေ့ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုပြောင်းလဲပစ်စေခြင်းငှါဆိုလို။
vasoactive အေးဂျင့်များ၏လွှတ်ပေးရန်အားဖြင့်, အ Corpus cavernosum ၏ endothelium ကပ်လျက်ချောမွေ့ကြွက်သားများသေံပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်တစ်ခုစိုက်ထူ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသို့မဟုတ်တားစီးထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ NO, Prostaglands လုပ်လိုက်တာ, နှင့် polypeptide endothelins အဆိုပါ endothelial ဆဲလ်ထဲမှာဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။5, 91 တိုးမြှင့်သွေးစီးဆင်းမှု၏ရလဒ်အဖြစ် endothelial ဆဲလ်၏ဆန့် acetylcholine အားဖြင့် endothelial ဆဲလ်အပေါ် cholinergic receptors ၏ activation သို့မဟုတ် NO များလွှတ်ပေးရန်မှတဆင့်နောက်ခံချောမွေ့ကြွက်သားအပန်းဖြေထုတ်ယူစေနိုင်သည်။ ဆီးချိုရောဂါနှင့် hypercholesterolemia တွင်းကြွက်သားများနှင့်ချို့ယွင်းစိုက်ထူ၏ endothelium-mediated အပန်းဖြေ၏ function ကိုပြောင်းလဲပစ်မှပြသခဲ့ကြသည်။129
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာဖြစ်ရပ်များ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ထို့ပြင်အဘယ်သူမျှမအကြောင်းမရှိလွတ်လပ်စွာပါဝင်နိုင်ပါသည်။ (စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်အော်ဂဲနစ်အပါအဝင်) ကိစ္စရပ်များကိုတစ်အဆငျ့ဆငျ့ဟာသင်ျခြိုပြည်နယ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အော်ဂဲနစ်အကြောင်းတရားများ၏တစ်ဦးကဆက်လက်နားလည်မှုအဆိုပါဆရာဝန်ဆုံးမခြင်းများအတွက်ကုထုံးရှာဖွေတွေ့ရှိအဖြစ်စိတ်ရှည်ဖို့အာမခံပေးခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
1. Sattar AA ကို, Salpigides, G, Vanderhaeghen JJ, et al ။ လိုဏ်ဂူအောက်စီဂျင်တင်းမာမှုနှင့်ချောမွေ့ကြွက်သားအမျှင်: စပ်လျဉ်းနှင့် function ကို။ J ကို Urol ။ 1995;154: 1736 ။ [PubMed]
2. Bosch ရဲ့ RJ, Benard က F, SR Aboseif, et al ။ penile detumescence: အဆင့်သုံးဆင့်၏စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ J ကို Urol ။ 1991;146: 867 ။ [PubMed]
3. Lue TF, Takamura T က, Schmidt က RA, et al ။ မျောက်အတွက်စိုက်ထူ၏ Hemodynamics ။ J ကို Urol ။ 1983;130: 1237 ။ [PubMed]
4. et al Saenz က de Tejada ငါတိန်းငါ Azadzoi K သည်။ ခွန်အားမရှိခြင်းနှင့်အတူဆီးချိုယောက်ျားထံမှ penile ချောမွေ့ကြွက်သားများ• Neurogenic disease အာရုံကြောနှင့် endothelium-mediated အပန်းဖြေအာရုံချို့ယွင်း။ N ကို Engl J ကို Med ။ 1989;320: 1025 ။ [PubMed]
5. Ignarro LJ, ဘုရ်ှက PA ဆိုပြီး, ဘူးဂါး GM က, et al ။ Corpus cavernosum ချောမွေ့ကြွက်သား၏လျှပ်စစ်လယ်ကိုဆွအကြောင်းမရှိအပန်းဖြေအပေါ်သို့နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်နှင့်သိသိ GMP ဖွဲ့စည်းခြင်း။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး Biophys Res Community ။ 1990;170: 843 ။ [PubMed]
6. de Groat, W, penile စိုက်ထူ၏ Booth အေဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောထိန်းချုပ်မှု။ ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့: Harwood, စစ 465-513, 1993 ။ ။
7. Walsh ကို PC, Brendler သမဝါယမ, Chang-T က, et al ။ အစွန်းရောက်တင်ပါးဆုံတွင်းခွဲစိတ်ကုသနေစဉ်အတွင်းအမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်။ Md Med ဂျေ 1990;39: 389 ။ [PubMed]
8. Paick JS, Donatucci CF, Lue TF ။ ဆီးကျိတ်မှ distal လိုဏ်ဂူအာရုံကြော၏ခန္ဓာဗေဒ: အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီး cadavers အတွက် microdissection လေ့လာမှု။ Urology ။ 1993;42: 145 ။ [PubMed]
9. အမြစ် W က, Bard P. အဆိုပါ gentalia ၏ deafferentation ပြီးနောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အချို့သောရည်ညွှန်းနှင့်အတူစာနာလမ်းကြောင်းမှတဆင့် feline စိုက်ထူ၏စေ့စပ်ဖြန်ဖြေ။ နံနက် J ကို Physiol ။ 1947;151: 80 ။
10 ။ Courtois FJ, Macdougall JC, Sachs bd ။ paraplegia အတွက် Erectile ယန္တရား။ Physiol ပြုမူနေ။ 1993;53: 721 ။ [PubMed]
11 ။ Paick JS, Lee က SW ။ apomorphine-သွေးဆောင်စိုက်ထူ၏အာရုံကြောယန္တရား: ကြွက်မော်ဒယ်အတွက် electrostimulation-သွေးဆောင်စိုက်ထူနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်စမ်းသပ်လေ့လာမှု။ J ကို Urol ။ 1994;152: 2125 ။ [PubMed]
12 ။ ကျောရိုးဒဏ်ရာနှင့်အတူ 529 လူနာအထူးရည်ညွှန်းနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအတွက် Bors အီး, Camarr အေအာရုံကြော distubances ။ Urol Surv ။ 1960;10: 191 ။
13 ။ လူကိုပြီးပြည့်စုံသောကျောရိုးဒဏ်ရာအောက်ပါ Chapel PA ဆိုပြီး, Durand J ကို, Lacert P. penile စိုက်ထူ။ br J ကို Urol ။ 1980;52: 216 ။ [PubMed]
14 ။ Halata Z ကို, Munger BL ။ လူ့ glans လိင်တံ၏ protopathic နည်းမနောများအတွက် neuroanatomical အခြေခံ။ ဦးနှောက် Res ။ 1986;371: 205 ။ [PubMed]
15 ။ McKenna Ke ။ penile စိုက်ထူဗဟိုထိန်းချုပ်မှု။ int J ကိုသင်ျခြို Res ။ 1998;10 (ပျော့ပျောင်း 1): S25 ။ [PubMed]
16 ။ et al ဘားနက် AL, Tillman SL, Chang TS ။ လူ့လိင်တံ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ innervation အတွက်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase ၏ Immunohistochemical localization ။ J ကို Urol ။ 1993;150: 73 ။ [PubMed]
17 ။ လေယာဉ်တင်သင်္ဘောက S, Zvara P ကို, Nunes L ကို, et al ။ ကြွက်များတွင်လိုဏ်ဂူအာရုံကြော neurotomy ပြီးနောက်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase ပါဝင်သောအာရုံကြော၏ပွနျလညျ။ J ကို Urol ။ 1995;153: 1722 ။ [PubMed]
18 ။ Giuliano က F, Rampin အို Jardin တစ်ဦးက, et al ။ လိင်တံ၏ dorsal အာရုံကြောနှင့်ကြွက်များတွင် lumbar စာနာကွင်းဆက်များအကြားဆက်ဆံရေး Electrophysiological လေ့လာမှု။ J ကို Urol ။ 1993;150: 1960 ။ [PubMed]
19 ။ Marson L ကို, McKenna Ke ။ အဆိုပါ ischiocavernosus နှင့် bulbospongiosus ကြွက်သားထိန်းချုပ်မှုပါဝင်ပတ်သက် CNS ဆဲလ်အုပ်စုများ: pseudorabies ဗိုင်းရပ်စ်သုံးပြီး transneuronal သဲလွန်စလေ့လာမှု။ J ကို comp Neurol ။ 1996;374: 161 ။ [PubMed]
20 ။ တန် Y ကို, Rampin အို Cala တစ်ဦးက, et al ။ Oxytocinergic နှင့်အထီးကြွက်များတွင် penile စိုက်ထူထိန်းချုပ်များအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်း lumbosacral အရေးပါ၏ serotonergic innervation ။ neuroscience ။ 1998;82: 241 ။ [PubMed]
21 ။ Sachs B, Meisel R. အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ဇီဝြဖစ်စဉ်။ နယူးယောက်: Raven စာနယ်ဇင်း, စစ 1393-1423, 1988 ။ ။
22 ။ Marson L ကို, Platt KB, McKenna Ke ။ pseudorabies ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၏ transneuronal သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအားဖြင့်ထင်ရှားသကဲ့သို့လိင်တံ၏ဗဟိုအာရုံကြောစနစ် innervation ။ neuroscience ။ 1993;55: 263 ။ [PubMed]
23 ။ Mallick HN, Manchanda SK ကို, Kumar က VM က။ ကြွက်များတွင် dorsal penile အာရုံကြောနှိုးဆွခြင်းအားဖြင့် medial preoptic ဧရိယာတွင် neuron လှုပ်ရှားမှုအာရုံခံမော်ဂျူ။ J ကို Urol ။ 1994;151: 759 ။ [PubMed]
24 ။ Stoleru ကို S, et al Gregoire MC, Gerard: D ။ လူ့ယောက်ျားအတွက်အမြင်အာရုံ evoked လိင်စိတ်နိုးထ၏ Neuroanatomical Correlate ။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 1999;28: 1 ။ [PubMed]
25 ။ Bocher M က, Chisin R ကို, Parag Y ကို, et al ။ တစ်ဦးညစ်ညမ်းကလစ်တုံ့ပြန်လိင်စိတ်နိုးထနှင့်ဆက်စပ်နှောက်လုပ်ဆောင်ချက်: လိင်ကွဲယောက်ျားတစ်ဦး 15O-H2O ပေလေ့လာမှု။ Neuroimage ။ 2001;14: 105 ။ [PubMed]
26 ။ ပန်းခြံ K သည်, Seo JJ, Kang ဟောင်ကောင်, et al ။ penile စိုက်ထူ၏နှောက်စင်တာများအကဲဖြတ်ဘို့ (BOLD) အလုပ်လုပ်တဲ့ MRI မှီခိုသောအသွေးကိုအောက်ဆီဂျင်အဆင့်အသစ်တစ်ခုအလားအလာဖြစ်ပါတယ်။ int J ကိုသင်ျခြို Res ။ 2001;13: 73 ။ [PubMed]
27 ။ Arnow BA, Desmond je, Banner ll, et al ။ ကျန်းမာ, လိင်ကွဲအထီးအတွက်ဦးနှောက်ကို Activation နှင့်လိင်စိတ်နိုးထ။ ဦးနှောက်။ 2002;125: 1014 ။ [PubMed]
28 ။ Redoute J ကို, Stoleru ကို S, Gregoire MC, et al ။ လူ့ယောက်ျားအတွက်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲနဲ့။ Hum ဦးနှောက် Mapp ။ 2000;11: 162 ။ [PubMed]
29 ။ Mouras H ကို, Stoleru ကို S, Bittoun J ကို, et al ။ ကျန်းမာတဲ့အမျိုးသားများတွင်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲနဲ့: တစ်အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ Neuroimage ။ 2003;20: 855 ။ [PubMed]
30 ။ Stoleru ကို S, Redoute J ကို, ကုန်ကျစရိတ် N ကို, et al ။ hypoactive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒရောဂါနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲနဲ့။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2003;124: 67 ။ [PubMed]
31 ။ et al Montorsi က F, Perani: D, Anchisi: D ။ apomorphine များ၏အုပ်ချုပ်ရေးကိုအောက်ပါဗီဒီယိုကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွနေစဉ်အတွင်းဦးနှောက်ကို Activation ပုံစံများ: ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled လေ့လာမှု၏ရလဒ်များကို။ EUR Urol ။ 2003;43: 405 ။ [PubMed]
32 ။ Walsh အမတ်။ အဆိုပါ Ayerst ဆုကိုပို့ချချက် 1990 ။ ချောမွေ့ကြွက်သားကျုံ့၏စည်းမျဉ်းများကယ်လ်ဆီယမ်-မှီခိုယန္တရားများ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျးဆဲလ် Biol ။ 1991;69: 771 ။ [PubMed]
33 ။ Somlyo AP, Somlyo AV စနစ်။ ကြွက်သားနဲ့ Non-ကြွက်သား myosin II ကိုချောမွေ့ရန်, G-ပရိုတိန်း, rho-kinase နှင့်ပရိုတိန်း phosphatase အားဖြင့် signal transduction ။ J ကို Physiol ။ 2000;522(Pt 2): 177 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
34 ။ Rees RW, Ziessen T က, Ralph DJ သမား, et al ။ လူ့နှင့်ယုန် cavernosal ချောမွေ့ကြွက်သားဆဲလ်တွေ Rho-kinase ဖော်ပြ။ int J ကိုသင်ျခြို Res ။ 2002;14: 1 ။ [PubMed]
35 ။ ဝမ် H ကို, eto M က, စတီယာရင် WD, et al ။ erectile function ကိုအတွက် RhoA-mediated Ca2 + ာင်း။ J ကို Biol Chem ။ 2002;277: 30614 ။ [PubMed]
36 ။ Rees RW, Ralph DJ သမား, Royle M က, et al ။ Y က-27632, Rho-kinase တစ်ခု inhibitor, ယုန်နှင့်လူ့ penile Corpus cavernosum အတွက် noradrenergic ကျုံ့ antagonizes ။ br J ကို Pharmacol ။ 2001;133: 455 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
37 ။ Chitaley K ကို Bivalacqua တီဂျေ, ချန်ပီယံ HC, et al ။ လွှမ်းမိုးအနုတ်လက္ခဏာ RhoA ၏ Adeno-ဆက်စပ်ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးဗီဇလွှဲပြောင်းကြွက်များတွင် erectile function ကိုပိုကောင်းစေပါတယ်။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး Biophys Res Community ။ 2002;298: 427 ။ [PubMed]
38 ။ Cellek S က, Rees RW, Kalsi ဂျေတစ်ဦးက Rho-kinase inhibitor, ပျော်ဝင် guanylate cyclase Active နှင့်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်-releasing PDE5 inhibitor: ဝတ္ထု erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုမှချဉ်းကပ်။ ကျွမ်းကျင်သူ Opin စုံစမ်းစစ်ဆေးမူးယစ်ဆေးဝါး။ 2002;11: 1563 ။
39 ။ Lizza EF, ရို RC ။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အဓိပ္ပာယ်နှင့်ခွဲခြား: သင်ျခြိုသုတေသနနိုင်ငံတကာလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ Nomenclature ကော်မတီအစီရင်ခံစာ။ int J ကိုသင်ျခြို Res ။ 1999;11: 141 ။ [PubMed]
40 ။ မာစတာ, W ကဂျွန်ဆင်, V. လူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု။ ဘော်စတွန်: Little ကဘရောင်း, 1970 ။
41 ။ WD Steers ။ penile စိုက်ထူ၏အာရုံကြောထိန်းချုပ်မှု။ seminal Urol ။ 1990;8: 66 ။ [PubMed]
42 ။ Diederichs W က, Stief CG, Benard က F, et al ။ စိုက်ထူထားတဲ့ရန်အဖြစ်စာနာအခန်းကဏ္ဍ။ Urol Res ။ 1991;19: 123 ။ [PubMed]
43 ။ Diederichs W က, Stief CG, Lue TF, et al ။ papaverine သွေးဆောင်စိုက်ထူ၏စာနာတားစီး။ J ကို Urol ။ 1991;146: 195 ။ [PubMed]
44 ။ Kim က SC, MM အိုး။ psychogenic ခွန်အားမရှိခြင်းအတွက် papaverine ၏ intracorporeal ဆေးထိုးဖို့တုန့်ပြန် Norepinephrine ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ J ကို Urol ။ 1992;147: 1530 ။ [PubMed]
45 ။ Bancroft ဂျေပို့ချချက် 4: psychogenic erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု-တစ်သီအိုရီချဉ်းကပ်နည်း။ int J ကိုသင်ျခြို Res ။ 2000;12 (ပျော့ပျောင်း 3): S46 ။ [PubMed]
46 ။ Abicht ဂျေစမ်းသပ်ခြင်းအတွက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသည့်စနစ်။ ခုနှစ်တွင်: Erectile အလုပ်မဖြစ်။ U. ယောန, ဒဗလျူ Thoh, C. Steif တည်းဖြတ်။ ဘာလင်: ။ SpringerVerlag, စစ 187-194, 1991 ။
47 ။ S က Aboseif, Shinohara K ကို Borirakchanyavat S က, et al ။ erectile function ကိုအပေါ်ဆီးကျိတ်၏ cryosurgical ablation ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ br J ကို Urol ။ 1997;80: 918 ။ [PubMed]
48 ။ Sachs B, RL အမ်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ဇီဝြဖစ်စဉ်။ ခုနှစ်တွင်: မျိုးပွားခြင်း၏ဇီဝကမ္မဗေဒ။ အီး Knobil, ဂျေ Neill, အယ်လ် Ewing တည်းဖြတ်။ နယူးယောက်: Raven စာနယ်ဇင်း, စစ 1393-1423, 1988 ။ ။
49 ။ Wermuth L ကို, ပါကင်ဆန်ရောဂါ Stenager အီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်။ seminal Neurol ။ 1992;12: 125 ။ [PubMed]
50 ။ Eardley ငါ Kirby R. • Neurogenic disease အာရုံကြောသင်ျခြို။ ခုနှစ်တွင်: သင်ျခြို: အမျိုးသား Erectile အလုပ်မဖြစ်၏ Diagnosis နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု။ R. Kirby, C. Carson, G. အ Webster တည်းဖြတ်။ အောက်စ်ဖို့။ Butterworth-Heinemann, စစ 227-231, 1991 ။
51 ။ Veenema RJ, Gursel EO, Lattimer JK ။ ကင်ဆာများအတွက်အစွန်းရောက် retropubic prostatectomy: တစ် 20 နှစ်အတွေ့အကြုံကို။ J ကို Urol ။ 1977;117: 330 ။ [PubMed]
52 ။ Finkle AL, တေလာ SP ။ အစွန်းရောက် prostatectomy ပြီးနောက်လိင်အာနိသင်။ J ကို Urol ။ 1981;125: 350 ။ [PubMed]
53 ။ Walsh ကို PC, Donker PJ ။ အစွန်းရောက် prostatectomy အောက်ပါသင်ျခြို: etiology နှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးသို့ထိုးထွင်းသိမြင်။ J ကို Urol ။ 1982;128: 492 ။ [PubMed]
54 ။ Weinstein က M, rectal carcinoma များအတွက်ခွဲစိတ်အောက်ပါရောဘတ်အမ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာနိသင်။ 44 လူနာတစ်ဦးကနောက်ကလိုက်။ အမ်းမြင့်တက်။ 1977;185: 295 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
55 ။ Yeager ES, ဗန် Heerden ဂျေအေ။ proctocolectomy နှင့် abdominoperineal ဆိုင်ရာပါရဂူကျမ်းပြုစုအောက်ပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု။ အမ်းမြင့်တက်။ 1980;191: 169 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
56 ။ McDermott DW, ဘိတ် RJ, Heney မိုင်, et al ။ တိုက်ရိုက်ရူပါရုံကိုချမ်းအေးဓါး urethrotomy ၏ရှုပ်ထွေးအဖြစ် Erectile ခွန်အားမရှိခြင်း။ Urology ။ 1981;18: 467 ။ [PubMed]
57 ။ Catalona WJ, Bigg SW ။ အာရုံကြော-ကြဲအစွန်းရောက် prostatectomy: 250 လူနာပြီးနောက်ရလဒ်များအကဲဖြတ်။ J ကို Urol ။ 1990;143: 538 ။ [PubMed]
58 ။ Quinlan DM, Epstein JI, Carter က BS, et al ။ အစွန်းရောက် prostatectomy အောက်ပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို: neurovascular အထုပ်၏ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ J ကို Urol ။ 1991;145: 998 ။ [PubMed]
59 ။ et al Montorsi က F, Guazzoni, G, Strambi LF ။ တစ်ဦးအလားအလာ, ကျပန်းရုံးတင်စစ်ဆေး၏ရလဒ်များကို: alprostadil ၏အစောပိုင်း intracavernous ထိုးနှင့်မပါဘဲအာရုံကြော-ကြဲအစွန်းရောက် retropubic prostatectomy ပြီးနောက်အလိုအလျောက် erectile function ကို၏ပြန်လည်နာလန်ထူ။ J ကို Urol ။ 1997;158: 1408 ။ [PubMed]
60 ။ Padma-နာသန် H ကို, McCullough တစ်ဦးက, အာရုံကြော-ကြဲအစွန်းရောက် retropubic prostatectomy မှအလယ်တန်းသစ်တော C. Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု: ကုထုံးနှင့်ဝတ္ထုကြိုတင်ကာကွယ်ရေးမဟာဗျူဟာအဘို့နှိုင်းယှဉ် phosphodiesterase-5 inhibitor ထိရောက်မှု။ Curr Urol ကိုယ်စားလှယ်။ 2004;5: 467 ။ [PubMed]
61 ။ et al brock, G, Nunes L ကို, Padma-နာသန် H ကို။ နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase: • Neurogenic disease အာရုံကြောခွန်အားမရှိခြင်းအသစ်တစ်ခုအဖြေရှာတဲ့ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ Urology ။ 1993;42: 412 ။ [PubMed]
62 ။ Stief CG, Djamilian M က, Anton P ကို, et al ။ သင်ျခြိုလူနာလိုဏ်ဂူလျှပ်စစ်လှုပ်ရှားမှုလူပျိုအလားအလာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရလိုဏ်ဂူကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်လိုဏ်ဂူချောမွေ့ကြွက်သားယိုယွင်းများအတွက်တတ်နိုင်သမျှအဖြေရှာတဲ့နည်းလမ်း။ J ကို Urol ။ 1991;146: 771 ။ [PubMed]
63 ။ Bemelmans BL, Meuleman EJ, Anten BW, et al ။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက် penile အာရုံခံမမှန်: 123 လူနာတစ်ဦးပြည့်စုံ neuro-urophysiological အဖြေရှာတဲ့အကဲဖြတ်၏ရလဒ်များကို။ J ကို Urol ။ 1991;146: 777 ။ [PubMed]
64 ။ Rowland DL, Greenleaf WJ, Dorfman LJ, et al ။ အိုမင်းခြင်းနှင့်အမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 1993;22: 545 ။ [PubMed]
65 ။ Mulligan T က, erectile ပျက်ကွက်မှုအတွက် Schmitt ခ testosterone ။ J ကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီး International Med ။ 1993;8: 517 ။ [PubMed]
66 ။ Granata AR, Rochira V ကို, Lerchl တစ်ဦးက, et al ။ အမျိုးသားများတွင်အိပ်စက်ခြင်း-related စိုက်ထူခြင်းနှင့် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်အကြားဆက်ဆံရေးမျိုး။ J ကို Androl ။ 1997;18: 522 ။ [PubMed]
67 ။ ဂရေဟမ်ကို C, ရီဂင်ဂျေအနိမ့်သို့မဟုတ် Low-ပုံမှန်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူသင်ျခြိုအမျိုးသားများတွင် testosterone ဟော်မုန်း enanthate ၏လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုမြင်နိုင်။ int J ကိုသင်ျခြို Res ။ 1992;P144
68 ။ Beyer ကို C, အာရုံခံခြင်းနှင့်မော်တာကျောရိုးယန္တရားများအပေါ်လိင် steroids ၏ Gonzalez-Mariscal G. အအကျိုးသက်ရောက်မှု။ Psychoneuroendocrinology ။ 1994;19: 517 ။ [PubMed]
69 ။ Mills က TM, အဆို့ VS, Wiedmeier VT ။ ကြွက်များတွင် penile စိုက်ထူ၏ hemodynamics အပေါ်သင်းနှင့်အန်ဒရိုဂျင်ကိုအစားထိုး၏ဆိုးကျိုးများ။ Biol Reprod ။ 1994;51: 234 ။ [PubMed]
70 ။ Penson DF, Ng သည်ကို C, Cai L ကို, et al ။ ကြွက်များတွင် penile နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase နှင့် erectile function ကို၏အန်ဒရိုဂျင်နှင့် pituitary ထိန်းချုပ်မှု။ Biol Reprod ။ 1996;55: 567 ။ [PubMed]
71 ။ Reilly CM, Lewis က RW, အဆို့ VS, et al ။ non-နိုက်ထရစ်-အောက်ဆိုဒ်-မှီခိုလမ်းကြောင်းမှတဆင့်ကြွက် erectile တုံ့ပြန်မှုအန်ဒရိုဂျင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု။ J ကို Androl ။ 1997;18: 588 ။ [PubMed]
72 ။ Shabsigh R. တွင်းတစ်သျှူးများနှင့် erectile function ကိုအပေါ် testosterone ဟော်မုန်း၏သက်ရောက်မှု။ ကမ္ဘာ့ဖလား J ကို Urol ။ 1997;15: 21 ။ [PubMed]
73 ။ Traish လေး, ပန်းခြံ K ကို Dhir V ကို, et al ။ တစ်ယုန်မော်ဒယ်အတွက် erectile function ကိုအပေါ်သင်းနှင့်အန်ဒရိုဂျင်ကိုအစားထိုး၏ဆိုးကျိုးများ။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 1999;140: 1861 ။ [PubMed]
74 ။ Leonard ကအမတ်, နီကယ် CJ, Morales အေ Hyperprolactinemia နှင့်ခွန်အားမရှိခြင်း: အဘယ်ကြောင့်အခါနှင့်ဘယ်လိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်။ J ကို Urol ။ 1989;142: 992 ။ [PubMed]
75 ။ မိခါလ V ကို, V ကို R.Histological အိုမင်းခြင်းနှင့်ဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူ penile artial အိပ်ရာများတွင်ပြောင်းလဲစေပါသည်။ ခုနှစ်တွင်: Vasculogenic သင်ျခြို: Corpus Cavernosum Revascularization ပေါ်ပထမဦးဆုံးနိုင်ငံတကာညီလာခံ၏ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ A. အ Zorgniotti နှင့် G. အရော့စီအားဖြင့် edited ။ Springfield, IL: ချားလ်စ်ကို C သောမတ်စ်, စစ 113-119, 1980 ။ ။
76 ။ စတိန်းငါ Feldman MI, နှစ်ထပ် PJ, et al ။ ဓါတ်ရောင်ခြည်-ဆက်စပ်ခွန်အားမရှိခြင်း။ ယင်း၏ယန္တရား၏လက်တွေ့လေ့လာမှု။ Jama ။ 1984;251: 903 ။ [PubMed]
77 ။ Levine FJ, Greenfield AJ, စတိန်းဗြဲ Arteriographically တုံး perineal တင်ပါးဆုံတွင်းစိတ်ဒဏ်ရာအောက်ပါသင်ျခြိုလူနာအတွက် hypogastric-လိုဏ်ဂူအိပ်ရာအတွင်း occlusive ရောဂါဆုံးဖြတ်သည်။ J ကို Urol ။ 1990;144: 1147 ။ [PubMed]
78 ။ ရိုအမတ်, Greenfield AJ, Walker က TG, et al ။ Arteriogenic ခွန်အားမရှိခြင်း: ရွေးချယ်ပြည်တွင်းရေး pudendal angiography နှင့်အတူဆန်းစစ် 195 သင်ျခြိုအမျိုးသားများတွင်တွေ့ရှိချက်။ လူငယ်သုတေသနရဲ့ဆုချီးမြှင့်။ ဒီယိုရောင်ခြည်ကုသမှုပညာ။ 1990;174: 1043 ။ [PubMed]
79 ။ Shabsigh R ကို, Fishman IJ, Schum ကို C, et al ။ vasculogenic ခွန်အားမရှိခြင်းအတွက်စီးကရက်ဆေးလိပ်နှင့်အခြားသွေးကြောအန္တရာယ်အချက်များ။ Urology ။ 1991;38: 227 ။ [PubMed]
80 ။ ရှည်လျားသောအကွာအဝေးအပျော်တမ်းစက်ဘီးစီးအတွက် Andersen ကကေဗွီ, Bovim G. အသင်ျခြိုနှင့်အာရုံကြော entrapment ။ Acta Neurol Scand ။ 1997;95: 233 ။ [PubMed]
81 ။ Ricchiuti VS, Haas, CA, Seftel အေဒီ, et al ။ avid စက်ဘီးစီးနဲ့ဆက်စပ် Pudendal အာရုံကြောဒဏ်ရာ။ J ကို Urol ။ 1999;162: 2099 ။ [PubMed]
82 ။ Junemann KP, Aufenanger J ကို, Konrad T က, et al ။ ယုန်၏ချောမွေ့ကြွက်သားဆဲလ်တွေအပေါ်ချို့ယွင်း lipid ဇီဝြဖစ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Urol Res ။ 1991;19: 271 ။ [PubMed]
83 ။ ရိုအမတ်, Greenfield AJ, Walker က TG, et al ။ စီးကရက်ဆေးလိပ်: arteriogenic ခွန်အားမရှိခြင်းနှင့်အတူယောက်ျား၏ hypogastric-လိုဏ်ဂူသည်သွေးလွှတ်ကြောအိပ်ရာမှာသွေးကြောတစ်လွတ်လပ်သောအန္တရာယ်အချက်။ J ကို Urol ။ 1991;145: 759 ။ [PubMed]
84 ။ မာတင်-Morales တစ်ဦးက, Sanchez-Cruz JJ, Saenz က de Tejada ငါ et al ။ ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်စပိန် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်လွတ်လပ်သောအန္တရာယ်အချက်များ: အ Epidemiologia de la Disfuncion Erectil Masculina လေ့လာမှု၏ရလဒ်များကို။ J ကို Urol ။ 2001;166: 569 ။ [PubMed]
85 ။ Feldman HA, စတိန်းငါ Hatzichristou DG, et al ။ သင်ျခြိုနှင့်၎င်း၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်မှု: အမက်ဆာချူးဆက်အမျိုးသားအိုမင်းခြင်းဟာလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကို။ J ကို Urol ။ 1994;151: 54 ။ [PubMed]
86 ။ Virag R ကို, Bouilly P ကို, Frydman ဃအနေနဲ့သွေးလွှတ်ကြောရောဂါခွန်အားမရှိခြင်းလား? 440 သင်ျခြိုအမျိုးသားများတွင်သွေးလွှတ်ကြောအန္တရာယ်အချက်များ၏လေ့လာမှုတစ်ခု။ ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet ။ 1985;1: 181 ။ [PubMed]
87 ။ Sullivan က ME, Thompson က CS, Dashwood MR, et al ။ နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်နှင့် penile စိုက်ထူ: erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုသွေးကြောရောဂါသည်အခြားပေါ်ထွန်းခြင်းပါသလဲ Cardiovasc Res ။ 1999;43: 658 ။ [PubMed]
88 ။ Tarhan က F, Kuyumcuoglu ဦး, Kolsuz တစ်ဦးက, et al ။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူလူနာအတွက်လိုဏ်ဂူအောက်စီဂျင်တင်းမာမှု။ int J ကိုသင်ျခြို Res ။ 1997;9: 149 ။ [PubMed]
89 ။ Moreland RB, Traish တစ်ဦးက, McMillin MA, et al ။ PGE1 လူ့ Corpus cavernosum ချောမွေ့ကြွက်သားအတွက် growth factor-beta ကို 1 ပြောင်းလဲနေဖြင့်ကော်လာဂျင်ပေါင်းစပ်၏ induction ဖိနှိပ်။ J ကို Urol ။ 1995;153: 826 ။ [PubMed]
90 ။ Nehra တစ်ဦးက, Gettman MT, Nugent M က, et al ။ ပြောင်းလဲ growth factor-beta1 (TGF-beta1) Vivo အတွက်ယုန် Corpus cavernosum ၏ fibrosis သွေးဆောင်ဖို့လုံလောက်ပါတယ်။ J ကို Urol ။ 1999;162: 910 ။ [PubMed]
91 ။ et al Saenz က de Tejada ငါ Moroukian P ကို, Tessier J ကို။ Trabecular ချောမွေ့ကြွက်သားလိင်တံ၏ capacitor function ကို modulates ။ တစ်ယုန်မော်ဒယ်ပေါ်လေ့လာရေး။ နံနက် J ကို Physiol ။ 1991;260: H1590 ။ [PubMed]
92 ။ Nehra တစ်ဦးက, Azadzoi KM, Moreland RB, et al ။ Cavernosal ချဲ့ထွင် vasculogenic erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်အတွက် trabecular တစ်သျှူးဆိုင်ရာဘာသာရပ်ခန့်မှန်းထားတဲ့အနေနဲ့ erectile တစ်ရှူးစက်မှုပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ J ကို Urol ။ 1998;159: 2229 ။ [PubMed]
93 ။ Mulvany MJ ။ သွေးတိုးရောဂါအတွက်အသေးစားသွေးလွှတ်ကြောအသစ်ပြန်ပြုပြင်တဲ့။ Curr Hypertens ကိုယ်စားလှယ်။ 2002;4: 49 ။ [PubMed]
94 ။ Okabe H ကို, Hale TM, Kumon H ကို, et al ။ လိင်တံကိုအကာအကွယ်မပေးပါ - သွေးတိုးရောဂါတွင်အခြားသွေးကြောဆိုင်ရာအိပ်ရာများနှင့်ဆင်တူသည့်လိင်တံတွင်သွေးကြောဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများရှိသည်။ int J ကိုသင်ျခြို Res ။ 1999;11: 133 ။ [PubMed]
95 ။ Toblli je, Stella ငါ Inserra က F, et al ။ ကောက်ကာငင်ကာသွေးတိုးရောဂါကြွက်များတွင်လိုဏ်ဂူတစ်သျှူးအတွင်း Morphological အပြောင်းအလဲများကို။ J ကို Hypertens ဖြစ်၏။ 2000;13: 686 ။ [PubMed]
96 ။ Hale က TM, Okabe H ကို, Heaton JP, et al ။ Antihypertensive မူးယစ်ဆေးဝါး penile vasculature ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြုပြင်သွေးဆောင်။ J ကို Urol ။ 2001;166: 739 ။ [PubMed]
97 ။ -Norman RA, Jr က Dzielak DJ သမား။ Immunological ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်မြှင့်တင်ရန်စာနာလှုပ်ရှားမှုအလိုအလျောက်သွေးတိုးရောဂါ၏ pathogenesis မှကူညီသည်။ J ကို Hypertens ပျော့ပျောင်း။ 1986;4: S437 ။ [PubMed]
98 ။ Mancia, G, စိမျးလနျး, G, Giannattasio ကို C, et al ။ ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုထိခိုက်ပျက်ဆီး၏သွေးတိုးရောဂါနှင့်တိုးတက်မှု၏ pathogenesis အတွက်စာနာ activation ။ သွေးတိုး။ 1999;34: 724 ။ [PubMed]
99 ။ Panza ဂျာ Quyyumi AA ကို, Brush je, Jr, et al ။ မရှိမဖြစ်သွေးတိုးရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ endothelium-မှီခိုသွေးကြောအပန်းဖြေ။ N ကို Engl J ကို Med ။ 1990;323: 22 ။ [PubMed]
100 ။ Taddei S က, Virdis တစ်ဦးက, Ghiadoni L ကို, et al ။ ဗီတာမင် C ကမရှိမဖြစ်သွေးတိုးရောဂါအတွက်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်လှုပ်ရှားမှု restore ပြန်အားဖြင့် endothelium-မှီခို vasodilation ပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ စောင်ရေ။ 1998;97: 2222 ။ [PubMed]
101 ။ Cai H ကို, Harrison DG ။ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများကိုအတွက် Endothelial ကမောက်ကမဖြစ်မှု: oxide စိတ်ဖိစီးမှု၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Circ Res ။ 2000;87: 840 ။ [PubMed]
102 ။ Suwaidi ဂျာ Hamasaki ကို S, Higano ST, et al ။ ပျော့သွေးကြောဆိုင်ရာသွေးကြောရောဂါနှင့် endothelial ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူလူနာရေရှည်နောက်ဆက်တွဲ။ စောင်ရေ။ 2000;101: 948 ။ [PubMed]
103 ။ Schachinger V ကို, Britten ကို MB, Zeiher လေး။ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ၏ဆိုးရွားသောရေရှည်ရလဒ်အပေါ်သွေးကြောဆိုင်ရာ vasodilator ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏၏အခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု။ စောင်ရေ။ 2000;101: 1899 ။ [PubMed]
104 ။ Rizzoni: D, Porteri အီး, Castellanos M က, et al ။ သွေးတိုးရောဂါအတွက် Endothelial ကမောက်ကမဖြစ်မှုဟာ etiology မှသွေးကြောဖွဲ့စည်းမှုကနေလွတ်လပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ သွေးတိုး။ 1998;31: 335 ။ [PubMed]
105 ။ Rizzoni: D, Porteri အီး, Castellanos M က, et al ။ အလယ်တန်းသွေးတိုးရောဂါအတွက်သွေးကြော hypertrophy နှင့်ပြုပြင်။ သွေးတိုး။ 1996;28: 785 ။ [PubMed]
106 ။ Konishi M က, ကောက်ကာငင်ကာသွေးတိုးရောဂါကြွက်သွေးလွှတ်ကြောများ၏ dilator တုံ့ပြန်မှုအတွက် endothelium ၏စု C. အခန်းက္ပ။ သွေးတိုး။ 1983;5: 881 ။ [PubMed]
107 ။ et al Behr-Roussel: D, Chamiot-Clerc P ကို, ဘာ J ကို။ pathophysiological ယန္တရားများ: ကောက်ကာငင်ကာသွေးတိုးရောဂါကြွက်များတွင် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ Integrated comp Physiol စည်းမျဉ်း J ကို Physiol ဖြစ်၏။ 2003;284: R682 ။ [PubMed]
108 ။ Rajagopalan S က, Kurz S က, Munzel T က, et al ။ ကြွက်များတွင် Angiotensin II ကို-mediated သွေးတိုးရောဂါအမြှေးပါးနတေစျဆငျ့ / NADPH oxidase activation မှတဆင့်သွေးကြော superoxide ထုတ်လုပ်မှုတိုးပွားစေပါသည်။ vasomotor သေံ၏ပြောင်းလဲရန်အလှူငွေ။ J ကို Clin Invest ။ 1996;97: 1916 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
109 ။ Heitzer T က, Wenzel ဦး, Hink ဦး, et al ။ တိုးမြှင့် NAD + renovascular သွေးတိုးရောဂါအတွက် (P), H ကို oxidase-mediated superoxide ထုတ်လုပ်မှု: ပရိုတိန်း kinase C. တစ်ခုပါဝင်ပတ်သက်မှုအဘို့သက်သေအထောက်အထား ကျောက်ကပ် Int ။ 1999;55: 252 ။ [PubMed]
110 ။ et al Cosentino က F, Patton S က, d'Uscio LV ။ Tetrahydrobiopterin prehypertensive ကြွက်များတွင် superoxide နှင့်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်လွှတ်ပေးရန်ပွောငျးလဲ။ J ကို Clin Invest ။ 1998;101: 1530 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
111 ။ ယန်: D, Feletou M က, Boulanger CM, et al ။ အောက်စီဂျင်-ဆင်းသက်လာအခမဲ့အစွန်းရောက်ကောက်ကာငင်ကာသွေးတိုးရောဂါကြွက်များကနေ aortas အတွက် acetylcholine မှ endothelium-မှီခိုကျုံ့ဖျန်ဖြေ။ br J ကို Pharmacol ။ 2002;136: 104 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
112 ။ Paniagua oa, Bryant ကို MB, Panza ဂျေအေ။ ယာယီသွေးတိုးရောဂါကိုတိုက်ရိုက်လူ့ microvasculature ၏ endothelium-မှီခို vasodilation ချို့ယွင်း။ သွေးတိုး။ 2000;36: 941 ။ [PubMed]
113 ။ Rajfer J ကို, Rosciszewski တစ်ဦးက, သင်ျခြိုယောက်ျားအတွက် Corporation သွေးပြန်ကြောယိုစိမ့်၏ Mehringer အမ်ပျံ့နှံ့နေတဲ့။ J ကို Urol ။ 1988;140: 69 ။ [PubMed]
114 ။ et al Metz P ကို, Ebbehoj J ကို, Uhrenholdt တစ်ဦး။ Peyronie ရဲ့ရောဂါနှင့် erectile ပျက်ကွက်။ J ကို Urol ။ 1983;130: 1103 ။ [PubMed]
115 ။ et al Iacono က F, Barra က S, က de ရို, G, ။ ခွန်အားမရှိခြင်းကြောင့်ထိခိုက်လူနာ Tunica albuginea ၏ Microstructural မမှန်။ EUR Urol ။ 1994;26: 233 ။ [PubMed]
116 ။ et al Iacono က F, Barra က S, De ရို, G, ။ စိုက်ထူကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲ Peyronie ရဲ့ရောဂါကြောင့်ထိခိုက်လူနာ Tunica albuginea ၏ Microstructural မမှန်။ J ကို Urol ။ 1993;150: 1806 ။ [PubMed]
117 ။ Dalkin BL, Carter က MF ။ Peyronie ရဲ့ရောဂါအဘို့အခါအသားအရေအဂတိလိုက်စားမှုပြုပြင်အောက်ပါ Venogenic ခွန်အားမရှိခြင်း။ J ကို Urol ။ 1991;146: 849 ။ [PubMed]
118 ။ ခရစျတျော GJ, Maayani S က, Valcic M က, et al ။ လူ့ erectile တစ်ရှူး Pharmacological လေ့လာမှုများ: အထီးကျန်တစ်ရှူးများတွင်အသက်အရွယ်နှင့်ရောဂါနှင့်အတူ alpha-adrenoceptor တုန့်ပြန်အတွက်အလိုအလျောက်ကျုံ့နှင့်ပွောငျးလဲ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ။ br J ကို Pharmacol ။ 1990;101: 375 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
119 ။ Cerami တစ်ဦးက, Vlassara H ကို, Brownlee အမ်ဂလူးကို့နဲ့အိုမင်း။ သိပ္ပံ Am ။ 1987;256: 90 ။ [PubMed]
120 ။ Hayashi K ကို Takamizawa K ကို Nakamura T က, et al ။ လက်စထရော-ကျွေးမွေးယုန်အတွက်သွေးလွှတ်ကြောနံရံများ၏တောင့်တင်းခြင်းနှင့် elastic ဂုဏ်သတ္တိများအပေါ် elastase ၏ဆိုးကျိုးများ။ သွေးကြော။ 1987;66: 259 ။ [PubMed]
121 ။ Sattar AA ကို, Haot J ကို, Schulman CC ကို, et al ။ လိုဏ်ဂူချောမွေ့ကြွက်သားသိပ်သည်းဆ၏ကွန်ပျူတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက် Anti-desmin နဲ့ anti-actin အစွန်းအထင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်။ br J ကို Urol ။ 1996;77: 266 ။ [PubMed]
122 ။ Mersdorf တစ်ဦး, ရွှေပန်းထိမ်ကို PC, Diederichs W က, et al ။ Ultrastructural သင်ျခြို penile တစ်ရှူးများတွင်ပြောင်းလဲ: 65 လူနာတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်။ J ကို Urol ။ 1991;145: 749 ။ [PubMed]
123 ။ Pickard သည် RS ဘုရင် P ကို, ရာဇာနေ MA, et al ။ သင်ျခြိုယောက်ျားအတွက် Corpus cavernosal အပန်းဖြေ။ br J ကို Urol ။ 1994;74: 485 ။ [PubMed]
124 ။ ဝါသနာရှင် SF, ချောက်ကမ်းပါး PR စနစ်, Melman တစ်ဦးက, et al ။ ယဉ်လူ့တပ်ကြပ်ချောမွေ့ကြွက်သားဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ Maxi-K သည် + (KCa) ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ J ကို Urol ။ 1995;153: 818 ။ [PubMed]
125 ။ Azadzoi KM, ပန်းခြံ K ကို Andris ကို C, et al ။ တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်အတွက် cavernosal ischemia နှင့်တပ်ကြပ် veno-occlusive ကမောက်ကမဖြစ်မှုအကြားဆက်ဆံရေးမျိုး။ J ကို Urol ။ 1997;157: 1011 ။ [PubMed]
126 ။ ခရစျတျော GJ, Moreno AP, က Parker ME, et al ။ ကွာဟမှုဆုံမှတဆင့် Intercellular ဆက်သွယ်ရေး: လူ့ Corpus cavernosum ကနေခွဲထုတ်သွေးကြောချောမွေ့ကြွက်သားအတွက် pharmacomechanical နားချင်းဆက်မှီနှင့် syncytial တစ်ရှူးကျုံ့အတွက်အလားအလာရှိသောအခန်းကဏ္ဍ။ ဘဝကသိပ္ပံ။ 1991;49: PL195 ။ [PubMed]
127 ။ Lerner SE, Melman တစ်ဦးကခရစျတျော GJ ။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏တစ်ဦးကပြန်လည်သုံးသပ်: သစ်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုနှင့်ပိုပြီးမေးခွန်းများကို။ J ကို Urol ။ 1993;149: 1246 ။ [PubMed]
128 ။ Persson, C, Diederichs W က, Lue TF, et al ။ လက်တွေ့သွေးလွှတ်ကြောအကဲဖြတ်နှင့်အတူပြောင်းလဲ penile ultrastructure ၏ဆက်စပ်မှု။ J ကို Urol ။ 1989;142: 1462 ။ [PubMed]
129 ။ Azadzoi KM, Saenz က de Tejada ဗြဲ Hypercholesterolemia ယုန် Corpus cavernosum ချောမွေ့ကြွက်သားများ endothelium-မှီခိုအပန်းဖြေချို့ယွင်း။ J ကို Urol ။ 1991;146: 238 ။ [PubMed]